Facebook အကောင့်ကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ။ | Gadget သတင်း
Facebook သတင်း | | လူမှုရေးကွန်ယက်
ဒီနေ့ခေတ်မှာလူမှုကွန်ယက်မှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်မရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ကိုရှာရန်ခက်ခဲသည် Facebook ကသို့သော်နောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့အချို့သည်၎င်းကိုအခြားသူများထက်ပိုမိုအသုံးပြုသော်လည်းယေဘုယျစည်းမျဉ်းအရကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသို့မဟုတ်အားလုံးနီးပါးသည်တစ်နေ့တွင်ဖြစ်ပျက်နိုင်သည့်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့ခံစားမိနိုင်ခြင်းကြောင့်၎င်းကိုရရှိရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်များစွာသောလူအများစုသည်လူမှုရေးကွန်ယက်တွင်သူတို့၏အကောင့်ကိုပိတ်ပစ်ချင်သည်မှာအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်သည်၊ ယင်းတို့တွင်သူတို့၏ဘ ၀ နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုမပေးရသောကြောင့်သို့မဟုတ်၎င်းတို့သည်၎င်းကိုမသုံးသောကြောင့်၎င်းတွင်မရှိခြင်းကိုနှစ်သက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်သိပ်မကြာသေးခင်ကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုမေးခဲ့တယ် သူ့ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပရိုဖိုင်ကိုသူဘယ်လိုပိတ်နိုင်မလဲ သူသည်အများပြည်သူရှေ့တွင်အလုပ်လုပ်ပြီးလူမှုရေးကွန်ရက်ကိုမကြာခဏပျော်မွေ့သည်ဖြစ်သော်လည်းသူသည်ဓာတ်ပုံများကိုအဘယ်ကြောင့်မတင်ပို့ရကြောင်း၊ သီတင်းပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်သူအဖြစ်သူငယ်ချင်းများအဖြစ်အဘယ်ကြောင့်လက်မခံခဲ့ခြင်းကိုသူ၏ဖောက်သည်များအားရှင်းပြရန်မလိုပါ စောင့်နေတယ်
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒီနေ့ဒီဆောင်းပါးမှာသင့်ရဲ့ Facebook အကောင့်ကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ၊ ဘယ်လိုပြန်ဖွင့်မလဲ၊။ ဤရွေးချယ်မှုနှစ်ခုအကြားခြားနားချက်မှာ၎င်းကိုပိတ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုပြန်ဖွင့်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်ရယူခြင်းပြုလုပ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းကိုအသုံးပြုရန်၎င်းကိုထပ်မံသက်ဝင်လှုပ်ရှားနိုင်ပါက၎င်းကိုရပ်ဆိုင်းပါကဤဆောင်းပါးတွင်လည်းရှင်းပြပါမည်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1 Facebook အကောင့်ကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ
2 Facebook အကောင့်ကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ
3 သင်၏ Facebook အကောင့်ကိုမည်သို့ပြန်လည်အသက်သွင်းမည်နည်း
4 ကျွန်ုပ်တို့၏ထောက်ခံချက် ...
ကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook အကောင့်ကိုပိတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအရာကိုသာလိုက်နာရမည် link ကိုအောက်ပါပုံတွင်တွေ့ရမည့်သတင်းစကားကိုပြလိမ့်မည်။
ဤစာ၌« Delete my account »ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook အကောင့်ကိုပိတ်နိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ စိတ်ထဲမှာမှတ်ထားရမှာက "မင်းကသင့်အကောင့်ထဲကိုတင်လိုက်တဲ့အချက်အလက်တွေဒါမှမဟုတ်အချက်အလက်တွေကိုပြန်ပြီးအသက်ဝင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။.
မသန်စွမ်း ကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook အကောင့်ကိုပိတ်ထားပါ ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါအဆင့်များကိုလိုက်နာရမည်။
ဝင်ရောက်ခွင့် "Settings" ကို။ ဤရွေးစရာသည်အောက်ပါညွှန်ပြသောမြှားတွင်တည်ရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့က private shortcut များဘေးတွင်၊ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်၌တွေ့လိမ့်မည်။ အောက်ပါပုံကိုမည်သည့်နေရာတွင်နှိပ်ရမည်ကိုသင်ကြည့်နိုင်သည်။
အကောင့်ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင် "Security" option ကိုသွားရပါမယ်။ ပြီးတာနဲ့ညာဘက် ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောရွေးချယ်မှုအားလုံး၏အဆုံးမှာကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏အကောင့်အားရပ်ဆိုင်းရန်အတွက်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိလိမ့်မည်။.
ဤရွေးစရာကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင့်အကောင့်အားရပ်ဆိုင်းလိုသည့်အကြောင်းပြချက်ကိုမဖြစ်မနေဖော်ပြရမည့်ဝင်းဒိုးအသစ်ကိုပြလိမ့်မည်။ ဤ ၀ င်းဒိုးတွင်သင်၏အကောင့်နှင့် ပတ်သတ်၍ အီးမေးလ်များထပ်မံမရရှိနိုင်သည့်ရွေးစရာကိုစစ်ဆေးရန်မေ့လျော့ထားရန်အရေးကြီးသည်၊ ဥပမာအားဖြင့်သူငယ်ချင်းဖိတ်ကြားမှုများကို။
အတည်ပြုခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ရမည် pop-up ၀ င်းဒိုးတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည် "Deactivate now" ခလုပ်ကိုနှိပ်ပါ ငါတို့အကောင့်ပိတ်ထားသော။
သင်၏ Facebook အကောင့်ကိုမည်သို့ပြန်လည်အသက်သွင်းမည်နည်း
သင်၏ Facebook အကောင့်ကိုသင်ပိတ်လိုက်ပါက၎င်းကိုပြန်လည်ရယူနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ အကယ်၍ ၎င်းကိုသင်ပိတ်ထားမှသာ၎င်းကိုပြန်လည်အသက်သွင်းရန် ၁၄ ရက်ရှိကြောင်းသင်သိသင့်သည်။ ဤရွေးချယ်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုမှားယွင်းစွာ deactivate သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ် ဦး ကထိုနည်းဖြင့်မသန်စွမ်းသူများအား deactivate လုပ်သော်၎င်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုယူဆရန်ဖြစ်သည်။
သင်၏အကောင့်ကိုပြန်လည်ဖွင့်ရန်၊ သင်ပုံမှန်ဝင်ရောက်လေ့ရှိသည့်အီးမေးလ်နှင့်စကားဝှက်ကိုဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပြန်ထည့်ရုံသာဖြစ်သည်။ သင်ဤအရာကိုပြုလုပ်ပြီးပါကဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကသင့်အားအကောင့်အားပိတ်ထားကြောင်းသင့်အားအကြောင်းကြားသည့်စာတစ်စောင်ကိုပြလိမ့်မည်။ သို့သော်သင်၏အချက်အလက်များကိုနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုပြန်လည်အသက်သွင်းနိုင်သည်။
သင် log in လုပ်ပြီးသည်နှင့်သင်၏ Facebook အကောင့်သည်နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်တက်လာပြီး၎င်းကိုပုံမှန်အတိုင်းပြန်သုံးနိုင်သည်။
သင်၏ Facebook ပရိုဖိုင်းကိုမည်သည့်နေရာတွင်ဖွင့်သည်၊ အထူးသဖြင့်သင်ဖွင့်ထားသောနေရာတွင်အလွန်သတိထားပါ ထို အချိန်မှစ၍ သင်၏အကောင့်ကိုမြင်သူမည်သူမဆိုနှင့်ထိတွေ့နိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ပရိုဖိုင်းသာမကသင်ရှိသည့်ဒေတာ၊ ဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများအားလုံးဆုံးရှုံးသွားစေနိုင်သည်။ မြန်မြန်ဆန်ဆန်အလွယ်တကူပြန်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဒီဟာကနိမ့်ကျတဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » လူမှုရေးကွန်ယက် » Facebook အကောင့်ကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ။
391 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
Stephanie Soledad Hinojosa Krause ဟုသူကပြောသည်
လွန်ခဲ့တဲ့ 13 အနှစ်
ကျေးဇူးပြုပြီးအမှန်ပါပဲ၊ ကျွန်ုပ် Facebook ကိုပိတ်ရန်ဘာလုပ်ရမှန်းမသိပါ၊ အမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်သည်များစွာသောအုပ်စုများတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်တောင်းပန်ခြင်းနှင့်တင်ပြခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အုပ်စုနှင့်မျှပူးပေါင်းမည်မဟုတ်ဟုကျိန်ဆိုပါသည် သူတို့တွေအားလုံးဟာကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့အုပ်စုတွေပါ၊ ကျွန်တော်တစ်ခါမှမတွေ့ဖူးဘူး။ ညစ်ညမ်းတဲ့တင်ပို့ချက်တွေ၊ သုံးစွဲမှုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့တခြားသူတွေကိုမှားယွင်းစေမယ့်မကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုငါလုံးဝမတွေ့ခဲ့ဘူး၊ Facebook ကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်းတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေဒါမှမဟုတ်အသိမိတ်ဆွေတွေကိုအလွယ်တကူရှာတွေ့နိုင်ဖို့အရမ်းအသုံးဝင်တဲ့ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ ပျင်းဖို့အချိန်တွေဖြုန်းဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့ဂိမ်းတွေဟာဘယ်လောက်ပျော်စရာကောင်းလိုက်မလဲ။ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော့်အကောင့်ကိုသူတို့ပိတ်ထားတာကစိတ်မကောင်းစရာပါ၊ ငါရေးထားတဲ့နံရံပေါ်ကအရေးအသားတွေကငါ့အတွက်အရမ်းတန်ဖိုးရှိတယ်။
PS: ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သို့အီးမေးလ် ၁၅၀ ခန့်ပို့ပေးခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုသင်တန်ဖိုးထားမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
Stephanie အားပြန်ကြားချက် soledad hinojosa krause
အကောင့်ပိတ်သိမ်းမှုအတွက်ရှင်းလင်းချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ရွေးချယ်စရာများကိုဖြေကြား။ အကောင့်ဖျက်သိမ်းခြင်းကိုတောင်းဆိုသောအခါ၎င်းသည်ကုဒ်များရှိသောစာမျက်နှာသို့ကျွန်ုပ်ကိုပို့ပြီးအကောင့်ကိုဖျက်သိမ်းခြင်းမရှိပါ။
plis ငါ့ကို facebook ကိုမြင်သလော
Fabio Rodrigo Pampin ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးပြုပြီးအမှန်ပါပဲ၊ ကျွန်ုပ် Facebook ကိုပိတ်ရန်ဘာလုပ်ရမည်ကိုမသိပါ၊ ညစ်ညမ်းသောပို့စ်များကိုကျွန်တော်မတွေ့ပါ၊ အသုံးပြုသူများ၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများကိုမှားယွင်းစေမည့်မကောင်းသောအရာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှကျွန်ုပ်မမြင်တွေ့ရပါ။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ သူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်အသိမိတ်ဆွေများကိုအလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်ဖို့၊ ပျင်းစရာအချိန်များနှင့်သူတို့၏ဂိမ်းများသည်အလွန်ပျော်စရာကောင်းသည်။ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော့်အကောင့်ကိုသူတို့ပိတ်ထားတာကသနားစရာပဲ၊ ငါရေးထားတဲ့နံရံပေါ်ကအရေးအသားတွေကငါ့အတွက်အရမ်းစိတ်ညစ်စရာကောင်းတယ်
Fabio Rodrigo Pampin အားပြန်ကြားပါ
ကျေးဇူးပြုပြီးဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကို mr ပိတ်ပါ
roraima zambrano ဟုသူကပြောသည်
ငါ link link ကိုမရကြဘူး? ငါဘယ်လိုလုပ်နိုင်လဲ .. ငါဖျက်ပစ်ရမယ်။ သူတို့ကငါ့နာမည်ကိုဖန်တီးလိုက်တာ .. ပြီးတော့ငါနဲ့ဓာတ်ပုံတွေ၊ နာမည်မထည့်ထားတဲ့အရာတွေကိုငါ့နာမည်ထဲမှာထည့်ထားတယ် .. အကူအညီလိုတယ်
roraima zambrano အားပြန်ကြားပါ
ငါသည်သင်တို့ကိုငါ့အ facebook ကိုပိတ်လိုက်ချင်တယ်! ကျေးဇူးပြုပြီး ... ။ ဒီဟာကိုပိတ်ထားပြီးပါပြီ။ ကျိန်းသေကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုပိတ်ပါ
Juan Juan restrepo ဟုသူကပြောသည်
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သို့ ၀ င်ရန်ကျွန်ုပ်၏စကားဝှက်ကိုမေ့သွားပြီးအသစ်တခုဖွင့်ရန်၎င်းကိုပိတ်ထားချင်ပါသည်။ မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ပြုလုပ်ရမည်ကိုသိလျှင်သင့်အကူအညီကိုကျွန်ုပ်တန်ဖိုးထားပါမည်။
juan carlos restrepo သို့ပြန်သွားရန်
ကျွန်ုပ်၏ facebook စာမျက်နှာကိုဖျက်ချင်ပါတယ်
maria teresa စာပြန်ရန်
မျက်နှာစာအုပ်အကောင့်ကိုဖျက်ရန်နည်းလမ်းမရှိပါ၊ ၎င်းကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်းမပြုရန်အလုပ်မလုပ်ပါ၊ အမှားအယွင်းရှိသည့်ထပ်တူမျက်နှာစာစာလည်းသင့်ကိုမဖြုတ်ပါစေနှင့်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လှည့်စားခြင်း၊ လိမ်လည်ခြင်း၊ ခိုးခြင်း၊ ငါနှာခေါင်းပေါက်တယ်
ငါဖေ့စ်ဘုတ်ကိုပိတ်ချင်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအကောင့်ဘယ်မှာမတွေ့ဘူး၊ ပိတ်ချင်တယ်၊ လုပ်လို့ရတယ်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဝန်ဆောင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ fecebook ကိုသေချာစွာပိတ်ချင်သော်လည်းမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုကျွန်ုပ်ထပ်မံဝင်ရောက်နိုင်ကြောင်း၊ သုံးစွဲသူအနေနှင့်အသုံးပြုသူတစ် ဦး အနေနှင့်အသုံးမ ၀ င်ဟုယူဆသော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုရပ်တန့်နိုင်မည်ဟုမထင်ပါ။
အသုံးပြုသူအဖြစ်အလုပ်လုပ်သောကျွန်ုပ်၏ Facebook နှင့် gmal ကိုပိတ်ပါ။
အခု Facebook ဖေ့စ်ဘုတ်ကိုပြန်ဖွင့်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါစကားဝှက်ကိုမေ့သွားတယ်။ ငါ gmail ဖောက်ထားလို့ငါပိတ်လိုက်လို့ပြန်မရနိုင်ဘူး
ငါ့အကောင့်ကိုပိတ်ချင်တယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီးအခုပိတ်လိုက်ပါ။ ငါပိတ်ချင်တယ်
ဟယ်လို! ငါသည်သင်တို့ကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးချင်တယ်, ငါ့အကောင့်ခဏပိတ်လျှင်, တူညီတဲ့အသုံးပြုသူနှင့်အတူနောက်မှငါကဖွင့်နိုင်သလား? ဓါတ်ပုံများနှင့်ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများအားလုံးသိမ်းဆည်းထားသလား။ ငါနင့်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ဖြေကြားချင်ပါတယ်။ ပြန်ဖွင့်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ် !!
လေးစားပါတယ် !!! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ facebook စာမျက်နှာ
maria jose အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်ကိုဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်မှာပိတ်ထားစေချင်ပါတယ် အခြားအမည်နှင့် ထပ်မံ၍ လိုလားသူကိုပြန်ဖွင့်ရန်
?? ¢ ?? ဟုသူကပြောသည်
အိုလာ။ ကောင်းပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့်ကိုနာမည်အသစ်ဖြင့်ဖွင့်ရန်တူညီသောအရာကိုသိလိုပါသည်။ !! ကအရေးတကြီး xfavorr ဖြစ်ပါတယ်
?? ¢ ??
ကျွန်တော့် Facebook စာအုပ်ကိုပိတ်ချင်တယ်
ငါတူညီတဲ့မေး MAIA ကိုစောင့်ရှောက်
ငါသည်လည်း maiiaa & meluu နှင့်အတူတူပါပဲငါသိရန်လိုသည်ငါ့အကောင့်ကိုပိတ်ရန်နှင့်အခြားအသစ်တခုဖွင့်လှစ်။ Helpennnmeee xFaaa ..
Lara အလင်း ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်အလွန်စိတ်ပူမိပါသည်၊ တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်၏ msn နှင့် faceebok စကားဝှက်ကိုခိုးယူပြီး Luz Mariela Lara Duno ကဲ့သို့ဖန်တီးထားသောကျွန်ုပ်၏ pageebok တွင်ကျွန်ုပ်၏စာမျက်နှာကိုလုံးဝဖျက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးဒီအကောင့်ကိုပိတ်ထားရန်ကူညီပါ
ဘာလုပ်ရမှန်းပြောပြပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာစိတ်မ ၀ င်စားတဲ့ဒီလူဟာကျွန်တော့်ဓာတ်ပုံတွေ၊ အဆက်အသွယ်တွေနဲ့ရှုပ်နေတာကိုး
Luz Lara အားပြန်ကြားပါ
Jose Luis Villalba ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ Facebook မှတ်တမ်းများကိုမေ့လိုက်ပါ၊ နောက်ပါဒရိယန်တစ်ခုကိုဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်အလိုရှိခဲ့သည်။
jose luis villalba အားစာပြန်ပါ
ကျွန်ုပ်၏ Facebook အကောင့်ကိုပိတ်ချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုပိတ်ထားပြီးပါပြီ။ ဒါပေမယ့်သူကပိတ်လိုက်ပြီလို့ပြောပေမယ့်တကယ်ကိုပိတ်လိုက်တာကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်တဲ့အခါမှာအပြောင်းအလဲမရှိဘဲဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီးပိတ်လိုက်ပါ။ Facebook မှာလုံခြုံမှုမရှိဘူး။
ဒီစာမျက်နှာနဲ့မျက်နှာစာဆိုင်မှာငါ့အကောင့်ကိုဖွင့်လိုက်ပေမယ့်အမှန်တရားငါဒီလိပ်စာနဲ့အပြောင်းအလဲလုပ်ချင်တယ်ငါဟော်တယ်မှာငါရှိခဲ့တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါမပြောင်းလဲဘဲပြောင်းလဲဖို့အတွက်ငါ lili နဲ့ latina ထားခဲ့ပြီးပြီ။ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအဖြစ်မှဖယ်ရှာသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့်အားဤမက်ဆေ့ခ်ျတွင်ပါသောအီးမေးလ်နှင့်လုံးဝပိတ်ပစ်ရန်တောင်းဆိုလိုပါသည်။ အကြောင်းပြချက်မှာကျွန်ုပ်သည်အခြားအီးမေးလ်ဖြင့်အခြားအကောင့်တစ်ခုရှိပြီးကျွန်ုပ်တွင်အကောင့် (၂) ခုမလိုပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ငါအပြီးတိုင်ဖျက်လိုသောအကောင့်၏အချက်အလက်အားလုံးကိုဖျက်နိုင်ခြင်း။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏မက်ဆေ့ခ်ျတွင်ပါရှိသောကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့်ကိုပိတ်ပစ်ရန်တောင်းဆိုချင်ပါသည်။ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုမှာဤ Hotmail အကောင့်ကိုကျွန်ုပ်လွန်ခဲ့သောအချိန်ကပိတ်ပစ်ခဲ့သော်လည်း Facebook ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်မဝင်ရောက်နိုင်တော့ပါ။ ခြိမ်းခြောက်မှုများကြောင့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ အခြားလူများကဲ့သို့ပင်ကျွန်ုပ်၏ Facebook အကောင့်ကိုအမြဲတမ်းပိတ်ပါရန်သင့်အားတောင်းဆိုချင်ပါသည်။ အကြောင်းပြချက်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - လွန်ခဲ့သော ၁ နှစ်ခန့်ကကျွန်ုပ်သည် Facebook လောကသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့သော ၁ ပတ်ကကျွန်ုပ်၏အကောင့်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ မဟုတ်ပါ၊ သူကအီးမေးလ်နှင့် / သို့မဟုတ်စကားဝှက်မမှန်ကန်ကြောင်းပြောခဲ့သည် ငါဟာအမြဲတမ်းအီးမေးလ်ကိုအတူတူသုံးခဲ့ဖူးပြီး၊ ငါရဲ့ Facebook စကားဝှက်ကိုတစ်ခါမှမပြောင်းလဲခဲ့ဘူး၊ ငါ Hotmail အကောင့်ကိုဖွင့်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါငါအရမ်းအံ့သြသွားတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကငါ့အတွက်အလုပ်မလုပ်ဘူး (အီးမေးလ်ဒါမှမဟုတ်စကားဝှက်မှားတယ်လို့လည်းပြောတယ်) ငါ့ကိုစိတ်ပူစေတာကတစ်ယောက်ယောက်ကငါ့အကောင့်ထဲဝင်ပြီးရေးတာပဲ။ ဒီအဖြစ်အပျက်ကကျွန်တော့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတယ်။ မင်းငါ့ကိုကူညီနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါအကောင့်ကို Hotmail နဲ့ပိတ်ဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုကိုလည်းရှာလိမ့်မယ်။ မင်းရဲ့အကောင့်ကိုပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထာဝရကျေးဇူးတင်လိမ့်မယ်။ ငါဖေ့စ်ဘုတ်ကမ္ဘာကြီးသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလိမ့်မည်ဟုသေချာပါစေ။
Facebook လူကြီးလူကောင်း၊ ကျွန်ုပ်၏စကားဝှက်ကိုခိုးယူသောကြောင့်သင့်ထံမှထိုအီးမေးလ်ကိုပိတ်ထားချင်ပါတယ်
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်၏ Facebook ကိုပိတ်ထားပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးမပြုခဲ့သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တွင်အခြားအကောင့်တစ်ခုရှိပြီးနှစ်ခုလုံးတွင်နာမည်တူနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုမေ့သွားပြီး၎င်းကိုပိတ်ရန်ကြိုးစားသော်လည်းအလုပ်မလုပ်ပါ။ မင်းငါ့ကိုကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင်ငါအရမ်းကျေးဇူးတင်လိမ့်မယ်။
Amalia Antonieta Parada Alegría ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏မိသားစုနှင့်သာယာသောလူများနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ရန်အခွင့်အရေးရှိခြင်းအတွက် FACEBOOK တွင်ကျွန်ုပ်တည်းခိုခဲ့သမျှကာလပတ်လုံးကျွန်ုပ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ သို့သော်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာကျွန်ုပ်သည်ထူးဆန်းသောလူပုဂ္ဂိုလ်ကဤနည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်အားအန္တရာယ်ဖြစ်စေသောကြောင့်ပိတ်ရန်သဘောတူခဲ့သည် မည်သူလုပ်ဆောင်သည်နှင့်မည်သူလုပ်ဆောင်သည်ကိုပြန်ပေးလိမ့်မည်။
Amalia Antonieta Parada Alegríaအားတုံ့ပြန်ပါ
ငါ facce အတွက်အကောင့် avri ပေမယ့်ဘယ်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုသတိရပါဘူး
yesi galati အားပြန်လည်စစ်ဆေးပါ
အရူးမလေး Sarahy Villanueva Cardenas ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှ ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ဖွင့်လှစ်ထားသောကျွန်ုပ်မင်းဓာတ်ပုံများအပါအ ၀ င်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်အားကူညီရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထိုအကောင့်ကိုသင်ဖျက်ပစ်လျှင်ကျွန်ုပ်ကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်။
idalmy ကိုစာရာ Villanueva Cardenas သို့ပြန်သွားပါ
Roxana Assandri ဟုသူကပြောသည်
ဟယ်လို ! Facebook မှငါပယ်ဖျက်လိုပါကမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။
Roxana Assandri သို့ပြန်သွားပါ
Miguel roas ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏အကောင့်ကိုဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တွင်အချက်အလက်များစွာရှိသည်။ ၎င်းကိုဖွင့်ရန်ကြိုးစားသောအခါ၊ ပြုပြင်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း၊ နောက်မှငါကြိုးစားမည်၊ အဖြေတစ်ခုကိုငါတကယ်လိုချင်သည်၊ ကျေးဇူးတင်ပါသည်
miguel roas အားပြန်ပြောပါ
ပြင်သစ် CORTES ဟုသူကပြောသည်
ငါတစ်ပတ်အတွက်ငါ့စာရင်းကိုမရနိုင်ပါ။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အရာကပြင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုနောက်တစ်ခုငါဝင်နိုင်ပါပြီ။ မေး။ ။ ပိတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့သလဲ။
FRANCISCO CORTES သို့ပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ Facebook အကောင့်ထဲသို့ဝင်ရောက်နိုင်သည့်အချိန် ၄ ရက်ခန့်ရှိပါပြီ။ ၎င်းသည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပြုလုပ်နေကြောင်းနှင့်နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင်၎င်းကိုဖြေရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်အားပြောပြသော်လည်းကျွန်ုပ်မဝင်ရောက်နိုင်သေးပါသလော။ ဒီအစဉ်အဆက်ကိုသင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သလား ??? ကျွန်ုပ်မည်သည့်အချိန်တွင် ၀ င်ရောက်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်ထွက်သွားစဉ်ကျွန်ုပ်၏ဓါတ်ပုံများနှင့်အဆက်အသွယ်များကိုရရှိနိုင်မည်လား။ တစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကိုဖြေပါ။ ကျေးဇူးပြု။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သိချင်ပါတယ်။ စနေနေ့ကစပြီး Facebook ကိုဖွင့်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ wed စာမျက်နှာကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအောက်ရောက်နေတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ပျက်သေးဘူး၊ ဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
romina figueredo ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုပိတ်လိုက်ပါ။ ကျွန်ုပ် မှလွဲ၍ အခြားသူတစ် ဦး ဦး သည် ဦး လေးဖြစ်ကာကျွန်ုပ်၏ခွင့်ပြုချက်မရပဲသိမ်းပိုက်ထားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာများကိုပိတ်ဆို့နေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်ချက်ချင်းတုံ့ပြန်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
romina figueredo အားပြန်ပြောပါ
ငါဖျက်ပစ်လိုက်တဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့်တစ်ခုရှိပြီးအရင်ကငါသုံးခဲ့တဲ့အီးမေးလ်နဲ့အခြားတစ်ယောက်ကိုဖွင့်ချင်တယ်။ Fecebook ကငါ့ကိုခွင့်မပြုဘူး ငါလုပ်ပေးသကဲ့သို့
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဘယ်သူမှငါ့မျက်နှာကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲသိလား ??? plisss အဖြေများ
Iyalda မွန်ဆလီ ဟုသူကပြောသည်
သူတို့သည် Facebook အကောင့်များကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဝင်ရောက်၍ မသင့်တော်သောအရာများလည်းရေးသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်၏သား၏အကောင့်ကိုပင်ပြောင်းလဲပြီးဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏အကောင့်ကိုပိတ်ရန်လိုအပ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ စကားဝှက်မပါပဲမျက်နှာကိုရိုက်ရန်နည်းလမ်းအချို့လိုအပ်သည်။
Iyalda Monsalves အားပြန်ပြောပါ
မာရီယာ PERUCHET ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်ထိုပြPROနာကိုတစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်၏စကားဝှက်ကိုခိုးယူသွားသည်၊ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုပြောပြသည်။ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်သည် YOVILLE GAME ၏ဝါသနာပါသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့သည့်အရာများစွာကိုခိုးယူသွားသည်၊ ထိုသူတို့ကကျွန်ုပ်အားသူတို့၏ငွေပမာဏကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကသင့်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုကောင်းကောင်းသိထားတယ်။ ကျွန်ုပ်၏စကားဝှက်ကိုခိုးယူသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ကျွန်ုပ်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို YOVILLE GAME တွင်ခိုးယူရန်ကြိုးစားခဲ့ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏ငွေကိုကျွန်ုပ်အားပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်ငွေကိုကျွန်ုပ်အားပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ငါ့ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ပေးတာငါဂိမ်းထဲမှာအများကြီးကိုထည့်သွင်းခြင်း, သူတို့သည်အချိန်တို့မဟုတ်ပါ အကယ်၍ သူတို့သည်လည်း ZYNGA တွင်ငွေမရရှိပါကကျွန်ုပ်၏ငွေစာရင်းကိုပြန်လည်ရယူလိုပြီးကျွန်ုပ်၏အမှုအရာများ၊ ငွေစာရင်းပိတ်ဆို့ခြင်းခံရပါက၎င်းအားအကောင်းရှိပါသလား။ သူခိုးတွေအားလုံးကိုယူနိုင်မှာမဟုတ်ပေမဲ့ငါဘာမှမတတ်နိုင်ခဲ့ဘူးငါဘယ်လောက်တောင်ငါ့ငွေစာရင်းဘယ်လောက်ပဲငါ့ငွေစာရင်းဝင်မယ်ဆိုရင်ငါ့ရဲ့ငွေစာရင်းကိုငါပြန်နိုင်ဖို့ငါမျှော်လင့်ထားတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါ့ရဲ့ငွေစာရင်းတွေငါ့ဆီငါ့ငွေစာရင်းတွေဘယ်တော့မှဝင်လို့မရဘူး။ ငါ့ထံသို့ ပြန်၍ မလာ။ ကျွန်ုပ်မိသားစုနှင့်သူငယ်ချင်းများကိုသူတို့အကောင့်များသုံးလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အားကူညီပေးပါမည်သူမည်သူမဆိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ ကျွန်ုပ်ငွေများလွှဲပြောင်းယူခဲ့သည့် YOVILLE GAME မှပုံများစွာ၊ မှတ်ဉာဏ်များနှင့် YOVILLE GAME မှများစွာသောအရာများရှိခဲ့သည့်ဟက်ကာတစ်ယောက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ငွေစာရင်းကိုယူသွားခြင်းသည်မသင့်လျော်ပါ။ ငါသူတို့မျှော်လင့်ပါတယ်အိုင်တီပြန်ပေးလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ဒီလိုမလုပ်ရင် Hacker တစ်ယောက်ကငါ့ကိုခိုးသွားလိမ့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာငါ့ရဲ့ပစ္စည်းကိုငါ့ဆီယူဖို့ယူမှာမဟုတ်ဘူး။ ငါပြန်လာမယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ငါတောင်းပန်ပါတယ်လို့တောင်းပန်လိုက်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ငါ့ဆီမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့သတ္တိတွေအများကြီးရှိတယ်။ သူတို့ကငါ့ကိုကူညီပါလိမ့်မယ်အယူအဆငါ့ထံမှအရာခပ်သိမ်းကိုယူ!
MARIA PERUCHET သို့ပြန်ပြောပါ
ဟားဘတ် arantxa ဟုသူကပြောသည်
သူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏ Facebook နှင့် MSN အကောင့်များကိုပြုလုပ်ထားခြင်းကျွန်ုပ်၏ FB ကိုကျွန်ုပ်လက်လှမ်းမီပါကကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ FB ကိုမည်ကဲ့သို့ဖွင့်နိုင်မည်ကိုသိလိုလျှင်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းအားအကာအကွယ်ပေးနေသော X ကိုမတတ်နိုင်ပါ။ ငါ့ကိုပြသပြီးနောက်မှတ်ချက်များကျွန်ုပ်သည် Facebook စာအုပ်အသစ်နှင့်ထပ်မံစတင်မည် ...
ငါ URGEEEEEEE! /:
arantxa herbert အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်၏ဖြေရှင်းချက်ကိုမကြာခင်ဤအီးမေးလ်သို့ပို့ပေးပါ။ « aran.herbert@hotmail.com «ကျွန်ုပ်၏ Facebook စာအုပ်ကိုမည်သို့ပြုလုပ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည် Facebook ကိုပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ Facebook ဓာတ်ပုံမျက်နှာဖုံးများနှင့်အဆက်အသွယ်များပျောက်ဆုံးသွားသည်။ .- ဟက္ကာတစ်ယောက်ဟာအရာရာတိုင်းကိုဆုံးရှုံးဖို့အတွက်မသင့်တော်ပါ။
ကျွန်ုပ်၏စကားဝှက်ကို ပြောင်းလဲ၍ ပြောင်းလဲနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်၏အကူအညီကို fecebook တွင်ကျွန်ုပ်၏စကားဝှက်ကိုမမှတ်မိပါ
Juan Pablo Cejas ဟုသူကပြောသည်
juan pablo cejas သို့ပြန်သွားရန်
Diego Ramos ဟုသူကပြောသည်
Diego Ramos သို့ပြန်သွားပါ
လီနာ Paola ruiz ortiz ဟုသူကပြောသည်
lina paola ruiz ortiz မှစာပြန်ပါ
ကျွန်ုပ်ဖေ့စ်ဘွတ်ကိုပိတ်လိုက်သည်။ အကြောင်းမှာစင်ကြယ်သောအတင်းအဖျင်းများနှင့်ပconflictsိပက္ခများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံများအခိုးခံရစဉ်အခါတိုင်းအာရှသူပုန်များဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရေးပို့သမျှအရာအားလုံးဆိုလိုသည်မှာခေါင်းကိုက်ခြင်းဟူသည်စကားလုံးအနည်းငယ်ဖြင့်ဖယ်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ x ကိုပြည့်စုံ..¬¬
Carlos FRANCO- ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်အနည်းငယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်၊ ငါ facebook အကောင့်ကိုသုံးကြိမ်ပိတ်လိုက်ပြီးပြန်ဖွင့်တယ်။ အကောင့်ကိုတက်တက်ကြွကြွမထားချင်ဘူး၊ ငါမင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလေးစားဖို့လိုပါတယ်
CARLOS FRANCO မှစာပြန်ခြင်း
ငါ့မှာပုံမှန်အကောင့်ရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကပြောင်ပြောင်တင်းတင်းနဲ့ငါနောက်ထပ်အကောင့်တစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါအကောင့်အသစ်ကိုဖျက်ချင်တယ်။
ဟယ်လို! ဟေ့ငါအကောင့်ကိုပိတ်လို့မရဘူး !!! ငါအိုင်တီ X ကိုပိတ်ပစ်ချင် !!! ကူညီပါ
ကျွန်ုပ်အကောင့်အသစ်ဖွင့်ရန်ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုပိတ်ထားပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ပိတ်ပါ
Che ငါ ACCOUNT ကပြောသောအရာကိုမတှေ့နိုငျ !!!
fran !! XD ဟုသူကပြောသည်
grax x ဒေတာသာ k အကောင့်ထွက်မလာ !!! ကောင်းပြီ၊ k ise ဆိုသည်မှာ 'account settings' ကိုသွားရန်ဖြစ်သည်။ ii aii xD deactivate ...
fran အားပြန်ပြောသည် !! XD
ကျွန်ုပ်၏ Facebook ကိုအမြဲတမ်းပိတ်ချင်ပြီးကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်အကောင့်ကိုအခြားဖေ့စ်ဘုတ်အကောင့်တစ်ခုအတွက်ရနိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်၏ Facebook ကိုပိတ်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အိုကေ၊ ငါ့မျက်နှာနှင့်တစ်ခုလုံးရှိသည်၊ အမှန်တရားမှာ၎င်းသည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုမဖျက်လိုသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်စကားဝှက်ကိုဝင်းဒိုးထည့်သောအခါနှစ်ရက်တာကကျွန်ုပ်အားပြောသည်။ ငါ့ရဲ့စကားဝှက်ကိုကာကွယ်ဖို့ပြောတဲ့စကားလုံးတွေအများကြီးထည့်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ငါ့ရဲ့စကားဝှက်အသစ်ကိုရေးခိုင်းပြီးငါ့အီးမေးလ်ကိုပြောင်းလိုက်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဖေ့စ်ဘွတ်နဲ့စကားဝှက်ကောင်းနေရင်အဲဒါကအရမ်းခက်တယ်။ ငါ့ကိုမတိုက်ခိုက်နိုင်ဘူး၊ ငါဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မပါဘဲသေတော့မှာမဟုတ်ဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်ဖိုင်ကဓာတ်ပုံတွေနဲ့မှတ်ချက်တွေတင်ခဲ့ရင်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရတာလဲ၊ ငါဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။
Walter Saavedra ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ Facebook အကောင့်ကိုအစဉ်အမြဲပိတ်ရန်လိုအပ်သည်၊ ပိတ်ထားသည်၊ သို့သော်၎င်းကိုကျွန်ုပ်အမြဲတမ်းပိတ်ချင်သည်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ပိတ်ပါ
walter saavedra အားပြန်ကြားပါ
တောင်းပန်ပါ၊ ကျွန်ုပ်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အားကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဖျက်သိမ်းပါကကျွန်ုပ်၏ Facebook အကောင့်ကိုမည်သို့ပြန်လည်ရယူရမည်ကိုသိပါသည်
ငါမကြာသေးမီကဤအကြောင်းကိုဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်၏အခြားအကောင့်ကိုပိတ်ရန်လိုအပ်သည်။ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်၏စကားဝှက်ကိုမေ့သွားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အခြားဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ !!
jovanny peraza ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ် Facebook အကောင့်ကိုဖျက်ချင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်၏contraceñaကိုမေ့သွားပါတယ်၊ ကျွန်ုပ် Facebook မှပုံပြင်လေးခုယူပြီးကျွန်ုပ် ၀ င်တော့အခါတိုင်းကျွန်ုပ်၏ဇာတ်လမ်းကိုပယ်ချလိုက်ပြီး၎င်းအားအလွန်ကောင်းမွန်စွာရေးချနိုင်မှာသေချာပါတယ်။
jovanny peraza အားပြန်ပြောပါ
ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်၌အကောင့် (၄) ခုရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာcontraceñaသည်ကျွန်ုပ်အားလုံးကိုငြင်းပယ်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ ပိတ်ပါ
ကျွန်ုပ်နှင့်နီးကပ်စွာရှိနေသောအီးမေး (လ်) လေးခုကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။ မည်သည့်နည်းနှင့်မဆိုဝင်ရောက်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ဂျူလီယန် figueroa ဟုသူကပြောသည်
julian figueroa အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်၏ Facebook အကောင့်ကိုမည်သို့ဖျက်သိမ်းနိုင်ကြောင်းသိလိုပါသည်။ အကြောင်းမှာသူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်လုံးဝမသင့်တော်သောဗွီဒီယိုများကိုတင်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်မလုပ်နိုင်သောကြောင့်ဘာလုပ်ရမည်ကိုမသိပါ။ ငါ့အကောင့်ကိုထည့်ပါ `ဖိုဒါမှအမြန်ဖယ်ထုတ်ရန်ကျွန်ုပ်လိုအပ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှအခြားမည်သည့်အရာများကိုမျှမသိလိုပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
constance camila ဟုသူကပြောသည်
kome က ke အသစ်အတွက်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်လုပ်ပါ
constanza camila သို့ပြန်သွားရန်
ငါ့မှာငါ့မှာဖေ့စ်ဘုတ်တွေအများကြီးရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ့ရဲ့စကားဝှက်ကိုမမှတ်မိတော့ဘူး၊ ငါဒီဖေ့စ်ဘုတ်ကိုတွေ့ချင်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါကအီးမေးလ်အတူတူပဲရချင်လို့ပါ။ rochu_sa@hotmail.com
ငါ့မျက်နှာကိုငါမပိတ်နိုင်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူက pageaaaaaaaaaaaaaaa ရဲ့အဆုံးမှာရွေးစရာတွေမပေးနိုင်လို့ပါ။
Carlos Chavez အားပြန်ပြောပါ
၎င်းကိုသင်ပိတ်နိုင်သည်ဆိုလျှင်သင် xfa ကိုကျေးဇူးတင်ပါ။ 😀
သူတို့သည်ငါ့အကောင့် plisss ပိတ်လိုက်
ဟယ်လို! သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကသူမရဲ့အကောင့်ကိုပိတ်လိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့်သူမကပြန်ဆယ်တင်လို့ရမလားမသိဘူး၊ သူမလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာသူမမသိဘူး၊ ငါသူမရဲ့အကောင့်ကိုပြန်ရချင်တယ်။ သူမထဲမှာရှိတဲ့အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုပြန်သွားပါ ပရိုဖိုင်း .. သိတဲ့သူကိုတကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ငါ့ကိုအဖြေပို့ပေးရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Joel G. ကိုပြန်ကြားခြင်း
ငါမင်းရဲ့ Facebook ကိုပိတ်ချင်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါဖေ့စ်ဘုတ်ကိုပိတ်ဖို့လိုတယ်။ အရေးတကြီးလိုချင်တယ်။ ငါတုန့်ပြန်မှုလိုတယ်
jasmin ၁၂ ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နဲ့ msn လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖေ့စ်ဘုတ်ကိုဖောက်ဖျက်သူကကျွန်တော့်နာမည်ကိုသူတို့ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်နေတဲ့အီးမေးလ်ကိုညစ်ပတ်အောင်မလုပ်မိစေချင်ဘူး။ yougirl_101@hotmail.com
eduar တောရက်စ် ဟုသူကပြောသည်
eduar torres သို့ပြန်သွားပါ
ဒီဟာကရေတွက်လို့ရတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်မမြင်ပါဘူး ကျွန်တော်ရှာမရဘူး ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါ🙂 Grrraaaaaaaaaaaaaaaaaaax! xD ဟားဟား
Carlo အေ Mauricio Facundo ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော့်အကောင့်ကိုပိတ်ချင်ပါတယ် ငါအဲဒါကို disable လုပ်ဖို့ကြိုးစားပေမယ့် ACCOUNT link ကိုရှာလို့မရပါဘူး။ အခြားနည်းများဖြင့်စာမျက်နှာပေါ်မှာအမှားတစ်ခုတွေ့ရသည်။
Carlo A. Mauricio Facundo အားစာပြန်ပါ
သင်၏ Facebook အကောင့်ကိုမည်ကဲ့သို့ပိတ်နိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်သိချင်ပါသည်။
ငါဖေ့စ်ဘုတ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်ထားသည်။ အတည်မပြုရသေးပါ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်နှင့် ps အားအီးမေးလ်သို့ပြောင်းလဲရန်ပြောပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏အကောင့်ကိုအတည်ပြုရန်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မက်ဆေ့ခ်ျမရရှိခဲ့ပါ။
မကောင်းတဲ့ဂိမ်းကငါ့အကောင့်ကိုမပိတ်နိုင်ဘူး၊ ငါ့ရည်းစား Pirobos နဲ့ငါနေရာချနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေလည်းရှိတယ်
ဟယ်လို! ငါပိတ်ဆို့ထားသူတစ် ဦး ၏မက်ဆေ့ခ်ျများချည်နှောင်ခြင်းကိုဖျက်ရန်နည်းလမ်းရှိသလားသို့မဟုတ်ငါ့အကောင့်ကိုရပ်စဲလိုက်ခြင်းသည်အခြားသူတစ် ဦး ၏စာပုံးမှပယ်ဖျက်သွားမည်လားဆိုသည်ကိုငါသိလိုသည်။
ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော့်ကို facebook ပိတ်ပါ
ပထမ ဦး ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်ငါတို့ချစ်မြတ်နိုးရသောသုံးစွဲသူအားလုံးသည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်စာလုံးပေါင်းခြင်းကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားတယ်၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် PALN DE LEVANTE တွင်အခြားသူများနှင့်မည်သို့ဆက်ဆံမည်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်နိုင်လိမ့်မည်။ အခြားမိသားစုတစ်စုတွင်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ Facebook Book ကိုလျှော့ချချင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်မိသားစုအမျိုးအစားတစ်ခု၏အဆင်မပြေမှုများကိုသင့်အားထည့်သွင်းထားခြင်းကြောင့်သင်၏အနေအထားဆိုးရွားခြင်းမရှိသော်လည်းအထက်ဖော်ပြပါညွှန်ကြားချက်များကိုကျွန်ုပ်လိုက်နာလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤအလုပ်သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်
Beatriz gallo ဟုသူကပြောသည်
စာမျက်နှာအခိုးခံရလျှင်၊ သူတို့သည်စကားဝှက်ကိုပြောင်းသောကြောင့် ထပ်မံ၍ ဝင်၍ မရနိုင်ပါကသင်မည်သို့အကောင့်ကိုပိတ်ထားသနည်း ????? ကျေးဇူးတင်ပါသည် !!!!
beatriz gallo သို့ပြန်သွားရန်
ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘုတ်အကောင့်ကိုအကြိမ် ၁၀၀၀ လောက်ကြိုးစားပြီးကြိုးစားခဲ့သော်လည်းမပိတ်နိုင်ပါ……🙂
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အကူအညီလိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားသည်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာသေဆုံးသွားပြီး၊ မနေ့ကအထိသူမရဲ့အကောင့်ကိုတက်တက်ကြွကြွရှိကြောင်းကြားသိရပါတယ်။ ဒီနေ့မှာ Facebook မှာသူမမှာအကောင့်မရှိဘူး၊ ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲ၊ ဘယ်လိုဖယ်ရှားပစ်ရမလဲ။ လူတစ်ယောက်သေဆုံးသွားပြီးသူမကသူမရဲ့အကောင့်ကိုဖျက်ပစ်လိုက်ပြီ။ သူမနှင့်သူမဖျက်လိုက်သောသူမ၏မှတ်ချက်များနှင့်သူမနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်မရရှိခဲ့ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်အဖြေပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
မင်္ဂလာပါ။ ငါ့အဘို့ကပိတ်ထားရန်! xq အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏စကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲလိုက်လျှင်ဘာဖြစ်မည်ကိုမသိပါ။ ငါပြောင်းလဲပြီးသားငါအရာအားလုံးကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်မရှိ! အမှု! ငါလုပ်ခဲ့သောတစ်ခုတည်းသောအရာကသင်သည်ငါ့ကို dactacten နှင့်ထို့ကြောင့်ထိုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူး! အသုံးပြုပါ ပျက်ပြယ်သွားပြီ မည်သူဝင်သည်ကိုသူမသိပါ q ရိုက်ထည့်ပါ! ငါ့မျက်နှာအကောင့်ပေါ်မှာ! သို့မဟုတ်အဘယ်သို့ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်း! ရှိပါတယ်! အများအပြား! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှင့် molstias များအတွက်စိတ်မကောင်း! နုတ်ဆက်ပါတယ်!
X မျက်နှာသာ !!!!!!!!! အရေးတကြီး !!!!!!!! လုပ်ပါ တစ်ခုခု ကျွန်တော်လိုပါတယ်! ထိုဖေ့စ်ဘုတ်သို့!
မင်းမသိဘူး ကျေးဇူးပြု၍ ဘာလုပ်ရမည်နည်း
အကယ်၍ သူတို့ကအဲဒါကိုကျွန်တော့်ဆီပြန်ပို့နိုင်ရင်၊ grax အများကြီး! နုတ်ဆက်ပါတယ်!
မင်္ဂလာပါ Soi rocio ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပြcommentနာနှင့်ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးပြီးပါပြီ။ ကျွန်တော်ရှင်းပြသည်မှာ၊ ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာမှာအောက်ဖော်ပြပါအကြောင်းဖြစ်သည်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က isoo imma ကျွန်ုပ်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဤမျှမြန်မြန်ရေးသည်။ မမှတ်မိတော့ပါ။ ကျွန်ုပ်မပါဘဲ session ကိုမစတင်နိုင်တော့ပါ ကိုယ်ပိုင်စကားဝှက်ဖြင့်အခြားဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်၎င်းကိုငါပယ်ဖျက်ချင်တယ်။ ဒါကြောင့်မင်းကိုငါ့ကိုအီးမေးလ်ပို့ဖို့ဒါမှမဟုတ်ဖျက်ပစ်ချင်တယ်။ ဖျက်လိုက်ရင်ငါမက်ဆေ့ခ်ျပို့စေချင်တယ်။ ' ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောတာကသူတို့ကအဲဒါကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်တာလို့မလိုချင်ဘူးလား၊ ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေပါ
သူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခိုကိုလည်းခိုးယူခဲ့ကြပြီးကျွန်ုပ်ပြန်လည်ရယူနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများလည်းဖြစ်ပျက်နေပါသည်။ သူငယ်ချင်းကောင်း၊ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စေခဲ့သော်လည်းပြန်လည်ပြင်ဆင်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းသို့မဟုတ်၎င်းသည်မရရှိနိုင်ကြောင်း၊ မဟုတ်ပါ၎င်းသည်မျှတမှုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဂိမ်းချည်နှောင်ခြင်းကြောင့် Facebook လုံခြုံရေးကိုလုံး ၀ ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ထိရောက်မှုမရှိတော့သောကြောင့်လူသားတို့အတွက်ပြိုကွဲစေသောလှိုင်းလုံးကြီးဖြစ်သည်။
ယေရှုခရစ်ဗက္ကရုဇ် ... ! * =)
Ate: လူသား ... ! * =)
FACEBOOK ADDICTS (CAFEWORD, FAMVILLE, etc)
tmr webones သူတို့ webenado ဖြစ်ချင်ပုံကိုသူတို့ထောင်ထဲမှာမသွားပေမယ့်လူထုံတွေအတွက်မိုက်မဲတဲ့အချိန်ကိုဖြုန်းတီးကြတာကိုနှစ်သက်ကြသည်။ WEBONES
ATTE Helen DC Y သင်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ Aceap ...... ၏ Ae ကိုအရိုးအဖြစ်ထားပါ
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်လုပ်ချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ အနမ်း
ငါဖေ့စ်ဘုတ်ကိုပိတ်ဖို့လိုတယ်၊ မပိတ်တော့ဘူး၊ ဒါကိုတစ်ကြိမ်ထက်မကလုပ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လည်းပိတ်တာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်ပိတ်ချင်တယ်
emmmm၊ စကားဝှက်ကိုမမှတ်မိတဲ့အတွက်သူတို့ကငါ့ကိုဒီစာကိုနောက်တစ်ခါမပို့ဘူးလို့သူတို့ကိုငါဘယ်လိုပြောလိုက်လဲဆိုတာကြည့်ပါ။ (?)
ကျွန်ုပ်၏အကောင့်၊ သတင်း၊ စာ၊ အရာအားလုံးမှအရာအားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်ချင်တယ်၊ ငါ Facebook နဲ့ဘာမှမပတ်သက်ချင်ဘူး ကျေးဇူးပြုပြီးဖျက်ပါ
Bart Simpson ဟုသူကပြောသည်
ay gosh inbecil ဘောင်းဘီကိုစားပါ
bart simpson အားပြန်ကြားပါ
Mauro Miguel ကိုလက်ထပ်ခဲ့သည် ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ မသင့်လျော်သောမှတ်ချက်များပေးသောမိုက်မဲသူများကကျွန်ုပ်၏အိမ်ထောင်ရေးကိုပြcausedနာဖြစ်စေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ Facebook အကောင့်ကိုပိတ်လိုက်ပါ။ သင့်အားဘယ်သူမှမယုံကြပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ၀ န်ဆောင်မှုသည်ကြီးကျယ်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်နှင့်ပြproblemsနာမရှိပါ။ ဒီလူတွေအတွက်အရာရာကိုငါဆုံးရှုံးသွားတော့မယ်၊ ခင်ဗျားကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အိမ်ထောင်သည် mauro miguel သို့ပြန်သွားရန်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ဖေ့စ်ဘုတ်အကောင့်ကိုပိတ်လိုက်တယ်။ အကြောင်းရင်းကိုငါသိချင်တယ်။ မင်းပြန်ဖွင့်ချင်ရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏စကားဝှက်ကို faccebook မှမည်သို့ပြောင်းလဲနိုင်သနည်း။ ၎င်းတို့သည်သူတို့ထည့်သွင်းနေသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်ကိုလည်း password ကို msg မှလည်းကောင်း၊ ပြောင်းလဲရန် faccebook တွင်သော်လည်းကောင်း၊ အတည်ပြုစာကိုအီးမေးလ်တစ်စောင်နှင့် pin ဖြင့်ထည့်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာအဲဒီမှာမရှိဘူး၊ စကားဝှက်အဟောင်းကိုမေ့သွားတယ်၊ အချက်အလက်၊ ဓာတ်ပုံ၊ အဆက်အသွယ်တွေမဆုံးရှုံးအောင်ကူညီပေးပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင်ဖေ့စ်ဘုတ်တွင်ပရိုဖိုင်းမရှိပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တစ် ဦး တစ်ယောက်က၎င်းကိုကျွန်ုပ်အတွက်ဖန်တီးပေးခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာကိုသိမ်းပိုက်ပြီးကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ဘဝကိုအကြီးအကျယ်ပျက်စီးစေပါသည်။
ဒီအထောက်အထားခိုးယူမှုကိုသတင်းပို့ရန်၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကသင့်အားပရိုဖိုင်းသည်မှန်ကန်ကြောင်းဖော်ပြသည့်ပုံစံကိုဖြည့်ရန်သင့်အားတောင်းဆိုသည်၊ သို့သော်ဤပရိုဖိုင်းသည်မရှိ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤလူမှုကွန်ယက်နှင့်လည်းမပတ်သက်လိုပါ။
ကျွန်ုပ်သည်တစ်စုံတစ်ရာ၏ပန်ကာတစ်ခုမည်သို့ဖြစ်လာမည်နည်း။ အကယ်၍ သင်သည် "စိတ်မကောင်းပါ။ သို့သော်သင်ကမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများထပ်မံပေါင်းထည့်။ မရပါ (သို့) အချို့ကိုမဖျက်မိပါကနောက်ထပ်စာမျက်နှာများကိုနှစ်သက်သူတစ် ဦး မဖြစ်နိုင်ပါ"> ။ <delete and NOTHING! ; S
သုံးစွဲသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်ုပ်၏ Facebook အကောင့်ကိုလုံးဝပိတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးဆိုတာဘာကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတာလဲ။ သင်အမြဲတမ်းလိုချင်နေသမျှကာလပတ်လုံးဘယ်လိုဖယ်ထုတ်ပစ်နိုင်မလဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမစဉ်းစားပဲကျွန်ုပ်တို့ကိုလည်းစဉ်းစားပါ။ ငါ့မှာဖေ့စ်ဘုတ်အကောင့်ဘာမှမရှိဘူး၊ ငါကငါ့ဖေ့စ်ဘုတ်အကောင့်ကိုမလိုချင်တော့ဘူး။ နည်းနည်းရှိရင်ကျေးဇူးပြုပြီးငါတို့သိအောင် !!
paula galiñanez ဟုသူကပြောသည်
ငါဖေ့စ်ဘုတ်ကိုမဝင်ရောက်နိူင်ပါ။ မနေ့ကမ ၀ င်ခင်အထိဘာတွေဖြစ်နေသလဲမသိဘူး၊ ဒီနေ့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုမမှန်ကန်သောစကားဝှက်မပေးနိူင်ပါ။
ငါသံသယထဲကယူခဲ့ !!! သုံးလလောက်လောက်မှာ Facebook အကောင့်မှာစာရင်းဖွင့်ထားတယ်။ ဒီနေ့အတွက်ငါဖိတ်စာတွေရပြီးလူတွေလက်ခံတယ်ဆိုတာကိုငါ့ကိုပြောပြတယ်။ မင်းကိုငါရှင်းပြချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပစ္စည်းတွေဟာငါ့အက္ခရာများဆီသို့ဒီအရာရောက်သည်။ ငါအကောင့်နဲ့ FACEBOOK ကနေငါ့ထံရောက်ရှိဖို့ငါ MASSSSS အီးမေးလ်များကိုမလိုချင်သောအမှန်တရားကိုပြီးဆုံးသွားပြီ။ ပြန်ကြားချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် !!!
ငါသည်ငါ့အကောင့်ကိုပိတ်နိုင်ခဲ့သည်ဒါပေမယ့်ငါတကယ်လုပ်နိုင်ချင်သောအရာကိုအီးမေးလ်အတူတူပြန်ဖွင့်ပေမယ့်ယခင်တ ဦး တည်းမှထောက်ပံ့ဒေတာမှားယွင်းနေသည်ကတည်းကတစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားအကောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုရှင်းပြပေးမယ့်သူတစ်ယောက်ကသူတို့ကိုခွင့်မပြုဘူးလို့ပြောတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ငါ့မှာအကောင့်နှစ်ခုရှိတယ်။ facebok မှာအကောင့်နှစ်ခုရှိတယ်။ ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကိုကျွန်ုပ်မ ၀ င်နိုင်ပါကအဖြေကိုစောင့်သည်
juan jose အားစာပြန်ပါ
ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်သို့ ၀ င်သော်လည်းထိုမက်ဆေ့ခ်ျသည်ကျွန်ုပ်ထံမရောက်ရှိပါ။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
လှိုင်းတံပိုးများကြည့်ရှုပါ kiero k ငါ့ကိုဖေ့စ်ဘုတ် k ခဲ့ငါ့အ msn: long_tiger150@hotmail.com တစ် hack ငါ့ကို hacked ဘို့ k
ငါသူတို့ပြproblemsနာများရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဒါကြောင့်သူတို့ကပိတ်ပစ်နှင့် k no kulpen de kosas k no ဖြစ်ကြောင်း, weno သူတို့ xer aser နိုင်မျှော်လင့်ပါတယ် weno
Jorge လူး Esposito ဟုသူကပြောသည်
ငါ့မှာနာမည်တူနဲ့အကောင့် (၂) ခုရှိတယ်။ ငါပိတ်ထားသောအကောင့်အဟောင်းပေါ်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်အသုံးပြုနေသောမူလအကောင့်ကိုမရနိုင်ပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီးအဟောင်းကိုပယ်ဖျက်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မကြာခင်သင့်ထံမှကြားနာရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
Jorge Luis Esposito အားပြန်ပြောပါ
ခြင် orore orozco ဟုသူကပြောသည်
ငါအဲဒီမှာမဝင်နိုင်သောကြောင့်ငါ facebook ကိုစွန့်ခွာချင်သောကြောင့်ငါ့ကိုမှားယွင်းတဲ့စကားဝှက်ကိုပြောတယ်
lorena orozco mosquera သို့ပြန်သွားပါ
johan david အားပြန်ပြောပါ
ငါ Facebook စာအုပ်ကိုပိတ်ချင်တယ်။ ငါဘယ်လိုလုပ်နိုင်လဲ ???
ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်တွင်သင်၏အချိန်ကိုမဖြုန်းပါနှင့်။ ဖြစ်နိုင်သမျှအချက်အလက်များကို၊ သင်၌ရှိသည့်ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများအားလုံးကိုဖျက်ပစ်ပါ၊ ဆက်တင်များကိုကြည့်ပြီးသင်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုပိတ်ထားပါ၊ သို့သော်အချိန်ကုန်မခံပါနှင့်၊ မင်းရဲ့ ၀ င်ငွေပမာဏတစ်ခုချင်းစီကိုမင်းကို ၀ င်စေတဲ့ငွေပမာဏ။ ချစ်ခင်ရပါသော Facebook ဖန်တီးသူ (များ)၊ မင်းရဲ့ရောဂါကငွေကံဆိုးတာပဲ။ ဒါပေမယ့်လူတိုင်းကသူတို့ရဲ့မြည်း x ကိုပတ္တူစက္ကူတွေနဲ့သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးသေရင်သူတို့သင်္ဂြိုဟ်ကြလိမ့်မယ် မြေအောက်သို့မဟုတ်လောင်ကျွမ်းခြင်း၊ သူတို့သည်မြေမှုန့်ဖြစ်လာကြပြီးဝမ်းနည်းစရာမှာသူတို့ပိုင်ဆိုင်သောငွေအမြောက်အများသည်၎င်းတို့အားအစေခံရန်မဟုပ်ဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားငတ်မွတ်သော Idiots !!
Gonzalez မာရီယာ Celeste ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်ဖန်တီးထားသောမျက်နှာစာအကောင့်ကိုပိတ်ပြီးစကားဝှက်နှင့်ပရိုဖိုင်းကိုပြောင်းလဲပေးသောအခြားသူကခိုးယူသော ကျေးဇူးပြု၍ လိုအပ်သည်။ ဒီတောင်းဆိုချက်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီအကောင့်ကိုအလေးအနက်မထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အသုံးမပြုတာနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ငါဒီနည်းအားဖြင့်ပြုပါသို့မဟုတ်ဘယ်လိုငါ့ကိုအကြောင်းကြားနိုင်လျှင်ငါအပြင်းအထန်တောင်းဆို ဖော်ပြထားသောအကောင့်သည်အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်ကိုက်ညီသည် mceles78@hotmail.com
GonzálezMaría Celeste အားပြန်ပြောပါ
ဝမ်းကွဲတစ်ယောက်ကွယ်လွန်သွားပြီကိုသင်မြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ မိသားစုကသင့်အားသူမ၏အကောင့်ကိုပိတ်လိုက်ရန်လိုသည်။ ၎င်းသည်ဖွင့်ထားဆဲဖြစ်သော်လည်းအဓိပ္ပာယ်မရှိသောသူမ၏စကားဝှက်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ပြုလုပ်နိုင်သနည်း။ တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံး xfavor ဖြေပါ ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်သည်ဤ Facebook အကောင့်ကိုကြာရှည်စွာသုံးစွဲခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများအားလုံးကိုထည့်ပြီးသောအခြားအကောင့်အတွက်ကျွန်ုပ်၏တူညီသောအီးမေးလ်ကိုလိုအပ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ဤဖေ့စ်ဘုတ်အကောင့်ကိုရပ်ဆိုင်းရန်သို့မဟုတ်ဖျက်ပစ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်အားကျေးဇူးတင်ကြောင်းသူတို့တုံ့ပြန်ကြသည်။
ကောင်းပြီ။ ငါဒီအီးမေးလ်ကိုဖတ်ပြီးဘယ်သူ့ကိုမဆိုအီးအီးမေးလ်နဲ့စကားပြောဖို့လိုလား BEEL-54@HOTMAIL.COM
အဖြူရောင်။ သို့) ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ, ငါ Hotmail အကောင့်ကိုပိတ်လိုက်ပြီးယခုငါ facebook အကောင့်ကိုဝင်ရောက်ခွင့်မရပါ ... ._ ။
ကျွန်ုပ်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်အခြားအကောင့်တစ်ခု ရှိ၍၊ ကျွန်ုပ်တစ် ဦး ကိုသိမ်းဆည်းထားလို။ မည်သို့လုပ်ရမည်နည်းဆိုသော်ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ကိုအစဉ်အမြဲပိတ်ချင်ပါသည်
ကျွန်တော့် Facebook Book CUTNA ကိုအမြဲတမ်းပိတ်ချင်တယ်
ငါ Facebook ကိုဘယ်လိုပိတ်မလဲ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!!! ငါကပိတ်နိုင် ကျေးဇူးတင်ပါသည် !!!!!!!!
ငါ့အကောင့် pliz ကိုပိတ်လိုက်!
ကျွန်ုပ်၏ Facebook Account Account ကိုထာဝရဖျက်လိုသည်။ ငါထပ်မဝင်ရ။ ငါပြီးသားအိုင်တီပိတ်ပစ်ခဲ့ကြပေမယ့်အိုင်တီဘာမှမသုံးပါ။ ဘယ်လောက်ပဲရှိပါစေ၊ ဒီအကောင့်ကမရှိတော့ဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်
federico ferrer ဖြစ်သည် ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်အကောင့်ကိုလုံးဝဖျက်လို။ deactivate လုပ်ပါသည်။ သို့သော်အရာအားလုံးပျောက်ကွယ်သွားစေရန်နည်းလမ်းရှာမတွေ့ပါ။ သို့သော်ဖျက်သိမ်းရန်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ဖျက်ပါ။
federico ferrer အားပြန်ပြောပါ
Diana Tiburzi ဟုသူကပြောသည်
သူတို့ကိုငါ Facebook မျက်နှာစာကနေမဖယ်ထုတ်ပစ်ရန်ကျွန်ုပ်၏အကောင့်ကိုလိုချင်သည်။ ဖြစ်နိုင်သမျှမြန်နိုင်သမျှမြန်အောင်ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူး။ သင့်အားများစွာကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Diana Tiburzi အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ဖေ့စ်ဘုတ်အကောင့်ကိုပိတ်ချင်ပါတယ်။ ငါအနမ်းအဖြေကိုမျှော်လင့်ပါတယ်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Maria de Jesus ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့် lomas များကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးမြင်တွေ့ချင်ပါသည်
maria de jesus အားပြန်ကြားပါ
ကျွန်တော့် facabook ကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ၊ ငါအဲဒီမှာမရှိတော့ဘူး၊ အတင်းအဖျင်းတွေအများကြီး
ကျွန်ုပ်၏ facebook ကိုအလျင်အမြန်ပိတ်ချင်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သူတို့ကို ကျေးဇူးပြု၍ အီးမေးဖြင့်ဖြေပါ။
ကျွန်တော့်အကောင့်ကိုတကယ်ပိတ်ဖို့လိုပြီးဘယ်သူ့ကိုမှမဖွင့်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့မှာပြproblemsနာတွေအများကြီးရှိတယ်။ ငါ့အတွက် ၀ င်လာပြီးအရမ်းရုပ်ဆိုးတဲ့သူတစ်ယောက်နဲ့ဒီအကြောင်းပိုမိုသိချင်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိတယ်။ စာမျက်နှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဤအကောင့်တွင်ကျွန်ုပ်မပါ ၀ င်ပါ၊ ကျေးဇူးပြု၍ အလျင်အမြန်ကြည့်ပါ
Ariel မာတင် costa ဟုသူကပြောသည်
ariel martin costa မှစာပြန်ရန်
alvaro ruiz ဟုသူကပြောသည်
ငါ့ဖေ့ (စ်) ဘွတ်ကိုပိတ်လို့ရလားသူတို့ပေးတဲ့ဖေ့ (စ်) ဘွတ် (၂) ကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စကားဝှက်တွေမမှတ်မိပါဘူး
alvaro ruiz သို့ပြန်သွားရန်
မင်းပြောတာကိုမင်းလုပ်ခဲ့ပေမယ့်အကောင့်ကမပိတ်သေးဘူး !!! ခွင့်ပြုချက်မပါပဲဖွင့်လို့မရလို့ပိတ်လိုက်တာပေါ့ကျေးဇူးပြုပြီး ..
ဟယ်လို!! ငါဖေ့စ်ဘွတ်ခ်လုပ်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
ငါ့ကိုကူညီဖို့မင်းကိုလိုအပ်တယ် အနမ်းငါ betina ပါပဲ!
ငါ့အကောင့်ကို faccebook ထဲမှာပိတ်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်အခု
MARIELA TORRES ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်ကိုအတည်ပြုရန်ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်ကိုအတည်ပြုရန်ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်ကိုအတည်ပြုရန် NOC ကကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်ကိုအတည်ပြုရန်ကျွန်ုပ်မသိပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ Facebook စာအုပ်ကိုဖွင့်ရန်ကျွန်ုပ်ကိုအီးမေးလ်အားအတည်ပြုပေးရန်အကြောင်းကြားပါ။ သို့သော် CODE နှင့် NOC အတွက်တောင်းပန်ပါ။
MARIELA TORRES သို့ပြန်ပြောပါ
aamm io ငါ Facebook ဝက်သားကိုပိတ်ချင်တယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ poko ကိုရှာချင်တယ်။
ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်ုပ်၏ facebook ကိုပိတ်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အက်ဝါဒို bertoncini ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ facebook.com မှလူကြီးလူကောင်း၊ ကျွန်ုပ်သည် Facebook ၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်ပြန်လည်ရယူလိုသောအရာများကိုကျွန်ုပ်နှင့်အတူပြန်လည်ရေးသားချင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်အားသူတို့၏ msn နှင့်ကျွန်ုပ်၏ facebook ကိုခိုးယူသည့်အမှန်တရားကိုကျွန်ုပ်အားကူညီပေးပါရန်တောင်းပန်ပါသည်။ လေးစားမှုရှိပေမယ့်အမှန်တရားကတော့ဒီအပြောင်းအလဲကိုဘယ်အချိန်မှာဘယ်ကနေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုငါသိချင်တယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီးမင်းရဲ့အကူအညီကိုတောင်းခံပါ
Eduardo bertoncini အားပြန်ပြောပါ
ငါအကွောငျးပွောသောအကောင့်အချို့အားဖြင့်ဒါဟာဒီ E-mail ကို djbertoncini ဖြစ်ပါတယ်
Patricio အန်တိုနီယိုLabrínဂို့ ဟုသူကပြောသည်
ငါ mclimbo@gmail.com »အကောင့်ကိုပိတ်ရန်တောင်းဆိုသည်၊ အကြောင်းမှာအခြားတစ်ယောက်ကငါ့ကိုမျက်နှာနှင့်မဟုတ် gmail အီးမေးလ် (ဖြစ်နိုင်သော hack ခြင်း) ထဲမ ၀ င်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ပထမ ဦး စွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Patricio Antonio Labrín Lagos ကိုပြန်သွားပါ
ငါမျက်နှာကြက်မလုပ်နိုင်ဘူး၊ မလုပ်နိူင်ဘူး၊ သူတို့ကငါ့ကိုလူတွေနဲ့အတုခိုးအောင်ကြိုးစားပြီးပြီ
ကျွန်ုပ်၌အကောင့်နှစ်ခုကို ဖျက်၍ ရမလားသိလိုသည်။ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တွင်နှစ်ခုရှိပြီးတစ်ခုမှာတစ်ခုသာအသုံးပြုသည်။ အခြားတစ်ခုမှာအီးမေးလ်သို့မဟုတ်စကားဝှက်ကိုကျွန်ုပ်မမှတ်မိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်မဖွင့်နိုင်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
karol lizeth duque rojas ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုဖျက်လိုသည်မှာကြီးမားသောပြhaveနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ဖွင့်လိုက်သောလိပ်စာမှားယွင်းစွာရေးခဲ့ပြီးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုပြောင်းရန်လိုအပ်သည့်ဓာတ်ပုံများတင်ထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်စကားဝှက်ကိုလည်းမမှတ်မိနိုင်ပါ။ သူတို့ကိုကူညီပါ ... ... ... ..
karol lizeth duque rojas အားပြန်ကြားပါ
လှပသော pipo ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ် Facebook ကို ၀ င်ရန်ကျွန်ုပ်၏စကားဝှက်ကိုကျွန်ုပ်လိုအပ်ပါတယ်၊ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတာမသိခဲ့ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူကကျွန်ုပ်ကိုမထောက်ပံ့ပါဘူး၊ ကျွန်ုပ်သည်သူငယ်ချင်းများနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း၊ ဖြစ်ရပ်များနှင့်အခြားသူများအကြောင်းမသိရခြင်း၊ ကျွန်ုပ်အားအမြဲတမ်းအသုံးပြုခဲ့သည့်အရာများကိုပေးပါ ငါမှာ messenger ထက်သူငယ်ချင်းပိုများတယ်။ ငါပိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ အီးမေးလ်နဲ့ငါ့ကိုပြန်ပြောပါ၊
pipo handsome အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့်သည်ကျွန်ုပ်၏အတွေးအခေါ်ကိုပြောင်းလဲစေပြီးကျွန်ုပ်သည်ရင်ပြင်များကိုဘာမျှနားမလည်သောကြောင့်သာတွေ့မြင်ရပြီးထိုအယူအဆကိုရယူ သုံးစွဲ၍ မရပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ဒီအခြေအနေကိုဖြေရှင်းပေးရန်ကူညီပေးပါ။
BRYANDA DANITZA ဟုသူကပြောသည်
ဟဲလိုငါ fecedook ရှိပြီ။ ငါ့ကိုသူမှတ်ပုံတင်စေချင်တယ်။ ငါမှတ်ပုံတင်ပြီးပြီ
BRYANDA DANITZA သို့ပြန်ပြောပါ
isabel estela ဟုသူကပြောသည်
သူတို့ကငါဖေ့စ်ဘွတ်ကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာလူမိုက်ပဲ။ ဒါပေမဲ့ငါကသူတို့ bolernos စက်တွေလိုချင်တဲ့ငါ့အချက်အလက်တွေမိတ္တူကူးထားတာကိုငါငြင်းခဲ့တယ်။
isabel estela အားပြန်ကြားပါ
angii ကီလိုမီတာ ဟုသူကပြောသည်
Ps ami သည်ကျွန်ုပ်၏မျက်နှာ၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုမေ့သွားသည်။ ၂ ထပ်မံ၍ မရနိုင်ပါ။ ii ps ia အခြားမျက်နှာတစ်ခုဖန်တီးသည်။ သို့သော်ထိုစကားဝှက်ကိုကျွန်တော်မမှတ်မိပါကမျက်နှာဟောင်း၏အကောင့်ကိုမည်ကဲ့သို့ပိတ်မည်ကိုကျွန်ုပ်သိလိုပါသည်။ သငျသညျအ angii ကင်မရာသို့မဟုတ် angii dii ပိုက်ကွန်သို့မဟုတ်အားဖြင့်ငါ့ကိုမျက်နှာ၌တွေ့နိုင်ပါသည် angiisk13@hotmail.com
angii kmro အားပြန်ကြားပါ
juliana maria သို့ပြန်သွားရန်
Carmen SANTIAGO ဟုသူကပြောသည်
ငါဂိမ်းကစားခြင်းမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲကျွန်ုပ်သိလိုသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Facebook စာအုပ်ပြသနာများရှိလိမ့်မည်။ သူတို့က၎င်းကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း (သို့) ၎င်းတို့သည်ငါကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ကရှင်းပြမည်။
CARMEN SANTIAGO သို့အကြောင်းပြန်ပါ
ကျွန်ုပ်၏စကားဝှက်ကိုမေ့သွားပြီးကျွန်ုပ်ဖေ့စ်ဘုတ်ကိုမဖွင့်နိုင်ပါ ကျွန်ုပ်ကြိုးစားပြီးပါသော်လည်းအီးမေးလ်အရကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်သို့ပို့သော်လည်းမပြီးပါ။ ငါခဏတာကြိုးစားနေတာဘာမှမရှိဘူး၊ မင်းငါ့ကိုဘာမှပို့မပေးခဲ့ဘူး၊ အမှန်တရားကတော့သူတို့ကိုငါမငြီးငွေ့စေချင်ဘူး။
brisa serna သို့ပြန်သွားရန်
Gonzalez Celeste ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်ဖန်တီးထားသောမျက်နှာစာအကောင့်ကိုပိတ်ပြီးစကားဝှက်နှင့်ပရိုဖိုင်းကိုပြောင်းလဲပေးသောအခြားသူကခိုးယူခဲ့သည်။ ဒီတောင်းဆိုချက်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီအကောင့်ကိုအလေးအနက်မထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အသုံးမပြုတာနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤနည်းအားဖြင့် ပြုလုပ်၍ ကျွန်ုပ်မည်သို့အကြောင်းကြားမည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်အခိုင်အမာပြောဆိုခြင်းမှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်နှင့်ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဖော်ပြထားသောအကောင့်သည်အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်ကိုက်ညီသည် beingsute78@hotmail.com
González Celeste အားပြန်ပြောပါ
Veronica diaz ဟုသူကပြောသည်
ငါ Facebook အကောင့်မှာစာရင်းဖွင့်ထားရတယ်။ HOTMAIL မှာရှိတဲ့အကောင့်လည်းရှိတယ်။ ငါက PASSWORD ကိုပြန်ပြီးမပြုပြင်နိုင်ဘူး။ ငါ့အကောင့်ကိုလက်ခံနိုင်ပြီ ဒီနည်းကိုဖျက်သိမ်းနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုခုရှိရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါ့ကိုကူညီပါ။ အိုင်တီကငါ့ကိုပျက်စီးစေနိုင်ပြီးပျက်စီးစေနိုင်တဲ့သူဘယ်သူ့ကိုကိုင်တွယ်ရမယ်ဆိုတာငါမသိဘူး။ ငါဖော်ပြသည့်ငွေပမာဏ - veronicadiazramos@hotmail.com
veronica diaz အားပြန်ကြားပါ
Sunday to Reply
yonas, သူတို့ဘယ်မှာကြာရှည်သနည်း ဟုသူကပြောသည်
helloaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!!!! အားလုံးကိုနွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါသည်။ ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်မှာဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြproblemနာအနည်းငယ်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏အကောင့်ကိုပိတ်ချင်ပါသည်။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်မည်သည့်အကောင့်တစ်ခုမှမလုပ်လိုပါ။ !!!!! ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်ုပ်အကောင့်မှထွက်ရန်ကူညီပါ။ နုတ်ဆက်ပါတယ်အရာအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်စကားနှင့်အဆင်မပြေမှုအတွက်စိတ်မကောင်း !! muakkkkkk muakkkkkk ………………………… !!!!!!! ATTM: Yonasqui Duran
yonasqui duran အားပြန်ပြောပါ
ကောင်းပြီ၊ ကဗျာ၊ အမှန်တရားကငါဘယ်လိုသုံးရမလဲမသိဘူး၊ နောက်ပြီးငါမသုံးတော့ဘူး၊ အချိန်မရှိဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါ့အကောင့်ကိုဖျက်သိမ်းချင်တယ်။
ကျွန်ုပ်၏ငွေစာရင်းကိုပရိသတ်တစ် ဦး အနေဖြင့်ပိတ်လိုလျှင်၎င်းသည်မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်နိုင်သနည်း ????????????????????
ငါပါဝါဖြတ်လိုက်ပြီးရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ငါရည်းစားရဲ့မျက်နှာကပိတ်သွားတယ်။ စကားဝှက်ကမှန်တယ်လို့မပြောနိုင်ဘူး။ ဒါ့အပြင်သူကမေးလ်ကိုမပို့ခဲ့ဘူး၊ အဲဒါကိုပြန်လည်ဖွင့်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ကျေးဇူးပြု၍ helpAAAAAAAAAAAAA လိုအပ်ပါတယ်
ငါ့မျက်နှာကို fasssss နဲ့ပိတ်ပါ
သူတို့ကိုငါ fa ya k let kaga ပန်ကာနှင့် amgiso စသည်တို့ဖြစ်ဘို့ငါ့မျက်နှာကိုပိတ်ချင်တယ်
victor rojas အားပြန်ပြောပါ
veronica alexandra vera riera ဟုသူကပြောသည်
veronica alexandra vera riera မှစာပြန်ပါ
ဒိုင်ယာနာကာရိုလိုင်းနား Zamora ဟုသူကပြောသည်
ဟယ်လို! လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်၌ပြhadနာတစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘုတ်အကောင့်ကိုပိတ်လိုက်သော်လည်းသူတို့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်သည်ကိုသတိပြုမိပါလိမ့်မည်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်သည်ပြန်လည်ထည့်သွင်း။ စကားဝှက်ကိုပြန်လည်ဖွင့်ပြီးယခုတွင် ၀ င်ရောက်ရန်ကြိုးစားသည်။ ၎င်းကိုပိတ်လိုက်ပါ။ ကျွန်ုပ်အကောင့်အားပိတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်ကျွန်ုပ်ထင်သောစကားဝှက်များကိုလက်မခံပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ သင့်အနေဖြင့်ဤအတွက်အဖြေတစ်ခုပို့ပေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သင်၏အမြန်တုံ့ပြန်မှုကိုစောင့်ဆိုင်းပါသည်။
Diana Carolina Zamora ကိုပြန်သွားပါ
ဂျင်းစန် Casiano diaz ဟုသူကပြောသည်
ဟယ်လို!! ငါ့မှာဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မရှိဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်က Enrique Rosario Kang (FB မှ Enrique Elrey Rosario Kang) ကကျွန်တော့်နာမည်နဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ FB ကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ အဲဒါကအထောက်အထားခိုးယူမှုနဲ့အသရေဖျက်မှုပဲ။ ဒီကိစ္စကိုအရေးယူချင်တယ်။ , ထိုပုဂ္ဂိုလ်နှင့်ငါ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုခိုးယူဖို့သူတို့ရဲ့စိတ်ကူးကိုတရားဝင်တိုင်ကြားချက်ပြီးသားရှိပါတယ်။ သင်၏အကူအညီကိုငါတန်ဖိုးထားပါလိမ့်မယ်။
jeann casiano diaz သို့ပြန်သွားပါ
ဒံယလေ vigueras benavides ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ကိုဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုဖြတ်ခိုင်းပါ။ အခြားမျက်နှာတစ်ခုဖွင့်ရန်ထိုအီးမေးလ်ကိုကျွန်ုပ်လိုအပ်သည်
daniel vigueras benavides အားပြန်ပြောပါ
karly altuve ဟုသူကပြောသည်
karly altuve အားပြန်ကြားပါ
Karina Rodriguez ဟုသူကပြောသည်
ငါမျက်နှာနှင့်အိုင်တီကောင်းစွာ MAIL နှင့်အတူ, ငါကဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်နေ့ရက်ကာလမရောက်မှီတိုင်အောင်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ juandiego1829@hotmail.com စကားဝှက်နှင့်သူငါ့ကိုမဖွင့်ပါ၊ သူသည်အကြိမ်ကြိမ်အခိုင်အမာပြောဆိုပြီးအခြားအကောင့်တစ်ခုဖြင့်အခြားမျက်နှာတစ်ခုကိုဖွင့်သောကြောင့်အကြိမ်ကြိမ်အခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့သည်။ ယခုငါလိုချင်သည်မှာကျွန်ုပ်၏ယခင်မျက်နှာကိုဖျက်ပစ်ရန်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်ကိုယ်စား၎င်းကိုသုံးပြီးကျွန်ုပ်မဟုတ်သောဓာတ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝအတွက်တင်ပို့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အကောင့်ကိုဖျက်ရန်စကားဝှက်မရှိသောကြောင့်ထိုမျက်နှာကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, mail ကိုမှပြန်ကြားချက်ပေးပို့ karinarodriguez29@hotmail.com... ။
KARINA RODRIGUEZ သို့ပြန်သွားပါ
Jessica အဖြူရောင် ဟုသူကပြောသည်
ငါဘာကြောင့်ငါ့ Facebook အကောင့်ကိုဖွင့်လို့မရဘူးလဲသိချင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒါဟာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအောက်မှာရှိနေတယ်
Jessica Blanco ကိုပြန်ပြောပါ
natalia artunduaga မော်လီနား ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါကျွန်ုပ်၏ tato များကိုအကောင့်တွင်ပြောင်းလဲလိုသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏အမည်များမှားယွင်းနေသည်။ ကျွန်ုပ်၏အမည်များသည် bonilla molina နှင့် artunduaga molina ပုံသဏ္findာန်ကိုကောင်းစွာမတွေ့ရှိနိုင်ပါ။ မကြာမီကျွန်ုပ်အဖြေရရှိရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
natalia artunduaga molina သို့ပြန်သွားပါ
ဒီကနေ့မှာငါ Facebook အကောင့်ကိုပိတ်လိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကိုအခုထိမတွေ့ရသေးဘူး၊ ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲ။
Algen သည်ကျွန်ုပ်၏စကားဝှက်ကိုပြန်လည်ရယူရန်ကူညီသည်။ ဤအပြုံးကိုကြည့်ပါ။ Algen သည်ကျွန်ုပ်၏စကားဝှက်ကိုကျွန်ုပ်လိုချင်သောတန်ချိန်ဖြင့်သိသည်။ alacando2884197 အတွက် Lacanbie ယခုကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါ။
ငါအခုဘယ်တော့မှပြောင်းလို့မရတော့ဘူး။ ငါ့ရဲ့ဂိမ်းတွေအားလုံးသေသွားရတော့မယ်။ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့စကားဝှက်ကဘယ်တော့မှမကိုက်တော့ဘူး
ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကသူတို့ကိုအလေးမထားဘူးဆိုရင်၊ စကားဝှက်ကအလုပ်မလုပ်ဘူး၊ စကားဝှက်တစ်ခုမပြောဘူး၊ နောက်တစ်ယောက်နဲ့လဲကောင်းကောင်းလဲလှယ်လို့ရတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ဒါကိုသိပ်ကောင်းကောင်းပိတ်ပင်မထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော့်ဇာတ်လမ်းပဲ၊ စကားဝှက်ကိုပြောင်းခြင်းသို့မဟုတ်လဲလှယ်ခြင်းကဲ့သို့သောအရာများ၊ စကားဝှက်အသစ်ကိုသင်၏အဖေအားဘာမှမပြောပါနဲ့
အမျိုးသမီး Melissa ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုပိတ်ရန်ပြောပါ၊ သူနာမည်သည် melisett၊ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားဟောင်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုစွဲလန်းသည်၊ သူသည်ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်များနှင့်ဖေ့စ်ဘုတ်ကိုခိုးယူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏စကားဝှက်များကိုလဲလှယ်နိုင်ပြီးသူလည်းကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံများကို အသုံးပြု၍ မရနိုင်ပါ။ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာသော်လည်းသူသည်ကျွန်ုပ်၏အဆက်အသွယ်များထဲသို့ဝင်ရောက်ပြီးကျွန်ုပ်၏လက်ရှိဓါတ်ပုံများကိုသူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများနှင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်၏ Facebook ကဲ့သို့ရိုက်ထည့်ပါ၊ သူနှင့်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူပုံပြင်တစ်ပုဒ်ပြုလုပ်ပြီးသူသည်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှိကြောင်း၊ အိမ်ထောင်ပြုပြီးကျွန်ုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ မှားယွင်းသောသတင်းအချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ၊ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိတော့ပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ Hotmail အီးမေးလ်ကိုလည်းဖျက်ပါ melisett@hotmail.com။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အသစ်ကိုဖန်တီးပါ၊ ဒါပေမယ့်ငါ့နာမည်မပါဘဲနဲ့ငါ့ဓာတ်ပုံကိုမဖုံးကွယ်ဘဲငါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ရှာမတွေ့တော့ဘဲဘဝတစ်ခုလုံးကိုမုန်းတီးဖို့လိုတယ်။ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ဘုံနဲ့သာမန်ဘ ၀ ကိုပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်။ ကူညီပါ။
Juan Paulo ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အားမည်ကဲ့သို့ဖျက်ပစ်ရမည်ကိုမသိပါ၊ ဖျက်ပစ်ပါ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
juan paulo အားပြန်ကြားပါ
Bernardo pardo ramos ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်၏ဇနီးနှင့် ပတ်သက်၍ ပြaနာရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ Facebook အကောင့်ကိုအရေးတကြီးဖျက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
bernardo pardo ramos သို့စာပြန်ပါ
စက်နည်းနည်းလေးသောသူများအတွက်မျက်နှာစာအုပ်ကိုအသုံးပြုရန်ခက်ခဲသည်။ !!!!!!!!!!!! အသုံးပြုသူကိုမသိဘဲပုံအချို့ကိုလည်းပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည်။ ၎င်းသည် ၀ ယ်သူများကိုရှုံးစေသောအရာများစွာရှိသောစာမျက်နှာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ atte daniel
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုပြောပြီးသူမအီးမေးလ်မှားနေလို့မျက်နှာမဖွင့်နိုင်လို့မင်းကိုကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင်တောင်းခံမှုမရတော့ဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!!!!! 😀
sergio ferrera ဟုသူကပြောသည်
sergio ferrera အားပြန်ကြားပါ
maria fernanda calero ဟုသူကပြောသည်
ငါ Facebook မှာငါ့အကောင့်ကိုပိတ်ချင်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမှန်တရားကဒါကိုငါမကြိုက်ဘူး၊ ငါ့ရဲ့ privacy ကိုပျက်စီးစေတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုမြင်ချင်တာမဟုတ်ဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
maria fernanda calero အားပြန်ကြားပါ
ဂျော့ခ်ျ Louis Torres Navarros ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်ကိုသင်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှရပ်ဆိုင်းစေချင်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်၏စကားဝှက်ကိုမေ့သွားပြီးမည်သို့ ၀ င်ရမည်ကိုမသိပါ။ သင်၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
jorge luis torres navarros အားပြန်ပြောပါ
noelia lafuente ဟုသူကပြောသည်
noelia lafuente မှစာပြန်ပါ
Louis Javier Ramon မှန် ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးပြုပြီးနောက်တဖန်ကျွန်ုပ်ကိုကုဒ်ထပ်မံပို့ပေးပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ဖေ့စ်ဘုတ်တွင်ကျွန်ုပ်၏အကောင့်ကိုဖွင့်နိုင်သည်
Luis Javier Ramon Mirror အားပြန်ကြားပါ
fecebook ကိုငါဖွင့်တိုင်း၊ ငါအကောင့်ဖွင့်တယ်၊
Kro k သည်ကျွန်ုပ်၏အကောင့် xk tergo2အကောင့်ကိုပိတ်ပြီးကူညီနိုင်သည်။ ၁ ကျွန်ုပ်သည်အကူအညီလိုအပ်သည် xf k k ကျွန်ုပ်တွင်သူငယ်ချင်းမရှိနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ကုဒ်နှင့်ကျွန်ုပ်ကျေးဇူးမတင်သော orta ကိုသိသောအကောင့်နှင့် ပတ်သက်၍ ရှုပ်ထွေးသည်။ မင်းကိုအရမ်းဂရုစိုက်သင့်တယ်
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်၏အကောင့်ကိုတစ်လပိတ်ထားလိုပါကကျွန်ုပ်သည်ဒေတာ (သို့) ဓါတ်ပုံများကိုမဆုံးရှုံးလိုပါ၊ ကျွန်ုပ်ကိုလည်းဆက်သွယ်နိူင်ပါသလား။
ကျေးဇူးပြု၍ nasecito ကိုကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုပိတ်လိုက်ခြင်းသည်မကောင်းသည့်အရာမဟုတ်သော်လည်းကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိပါ - s
မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဆယ်လီနာကိုဖုန်းဆက်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် facebook ကိုအရေးတကြီးပိတ်ရန်လိုအပ်သည်
lorena valerio ဟုသူကပြောသည်
ငါဖေ့စ်ဘွတ်ကိုအစဉ်အမြဲပိတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ငါမပိတ်နိုင်ခဲ့ဘူး၊ ငါဟာငါ့အကောင့်ကိုအမြဲတမ်းပိတ်ဖို့တောင်းပန်ပါတယ်၊
lorena valerio အားပြန်ပြောပါ
Denny Julieht Sanchez Stop ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ fecebook ကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီးအခြားအီးမေးလ်တစ်စောင်ကိုကျွန်ုပ်မည်သို့လုပ်နိုင်သနည်း။
denny julieht stop sanchez မှစာပြန်ရန်
ငါ facebook မပိတ်ချင်တော့ဘူး။
ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုမည်သို့ပြန်ပြောင်း။ ရနိုင်ပါသနည်း။ ကျွန်ုပ်မဖျက်နိုင်ပါ
francisco javier marque villegas ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ Facebook အကောင့်ကိုဘယ်လိုပိတ်နိုင်ကြောင်းသိချင်ပါတယ်။ အသစ်တစ်ခုရှိချင်ပါတယ်။ သင့်ကိုကူညီပါ။
francisco javier marquez villegas အားပြန်ကြားပါ
တစ်လတစ်လပတ်လုံးတစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်၏နာမည်နှင့်ဓာတ်ပုံကို FB တွင်ငွေစာရင်းဖွင့်ထားကြောင်းကျွန်ုပ်သတိပေးခဲ့သည်။ မည်သူမဆိုသိသည်လူတစ် ဦး သိသင့်သောအချက်အလက်များသည်ခိုးမှုရာဇ ၀ တ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် FB နှင့် POLED တွင်တရား ၀ င်ငွေရေးကြေးရေးငွေစာရင်းတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အချက်အလက်များသည်မည်သူမဆိုသိသည်လူတိုင်းသိသည့်မည်သူမဆိုသိသာသောခိုးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ FB ON ENRIQUE Rosario KANG VIAJAMELO@HOTMAIL.COM OR FREEBOOK ELREYSEXY) ဒီနည်းကိုအခြေခံပြီးတစ်ခုခုလုပ်ချင်တယ်။ FB မရှိဘူး၊ FB မထားဘူး၊ ဒီစာမူအပေါ်စာတွေယူမယ်ဆိုတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကြောင့်ရာဇဝတ်မှုဖြစ်လို့လား။
စိတ်မ ၀ င်စားပါ၊ သို့သော်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများကိုထပ်မံထည့်သွင်းခြင်းသို့မဟုတ်အချို့သောအရာများကို ဦး စွာဖျက်ခြင်းမပြုပါကနောက်ထပ်စာမျက်နှာများကိုနှစ်သက်သူတစ် ဦး မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒီဟာကဘာလဲ ငါဘယ်တော့မှဖြတ်မသွားခဲ့ဘူး၊ ငါမှာဆက်သွယ်ရန် 600 ရှိလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်သည်အများကြီးမဟုတ်ပါ၊ ဘာကြောင့်ဒီနည်းကို ME ပေါ်လာသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နားမလည်ဘူး။
ငါဖေ့စ်ဘွတ်ကိုပိတ်ထားလိုက်တယ်။ အကြောင်းရင်းကိုသိချင်တယ်။ သူတို့ကငါ့ကိုပြန်ပေးမယ်၊ မပေးရင်ဘာမှမနားလည်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒါကငါ့ကိုအများကြီးအနှောင့်အယှက်ပေးလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်၏မေးလ်ဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုဖြေဆိုနိုင်၊
ကျွန်ုပ်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုကျွန်ုပ်မမှတ်မိပါ။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်ထံပေးပို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်မည်သို့လုပ်နိုင်သည်ကိုသိလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် (၃) လကျော်အောင်မဝင်ရောက်နိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်အားကူညီပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
yessica trujillo ဟုသူကပြောသည်
သူတို့ကသင့်ကိုဒီအီးမေးလ်ပါတဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့်ကိုသေချာပိတ်လိုက်စေချင်တယ်။ အကြောင်းကတော့မကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကလူတွေကငါ့ဆီကလာပြီးငါ့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်၊ ​​ငါဟာအဆင်မပြေမှုများစွာကြုံခဲ့ရတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
yessica trujillo အားစာပြန်ပါ
Oriana Noble ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်သင်၏မျက်နှာကိုအမြဲတမ်းပိတ်ချင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းအားရပ်ဆိုင်းထားပြီးပါပြီ။ သို့သော်အားလုံးကိုဖျက်ပစ်ချင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ် Facebook မှပျောက်ကွယ်သွားချင်ပါသည်။
Oriana Noble အားပြန်ကြားပါ
paula katarina ဇာ arratia ဟုသူကပြောသည်
Mesito ကျွန်တော့်ရဲ့ပထမဆုံးအကောင့်ကိုတွေ့ပြီ။ ကျေးဇူးပြုပြီးမင်းကိုကူညီပါ။ စကားဝှက်ကိုမေ့သွားတယ်၊ ကူညီမယ်
paula katarina ဇာ arratia ပြန်ပြောပါ
မင်းလုပ်နိုင်တာကိုကြည့်ပါသင့်ရဲ့စကားဝှက်ကို "မင်းရဲ့စကားဝှက်ကိုမေ့သွားပြီ" လို့ရေးထားတဲ့နေရာမှာပြောင်းလိုက်တယ်။ အဲဒီမှာငါပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်။ မင်းရဲ့ msn ထဲကိုရောက်ဖို့လိုတယ်ဆိုရင် password အသစ်နဲ့အီးမေးလ်တစ်စောင်ရလိမ့်မယ်။ ဒီနည်းကိုကျွန်ုပ်အဖြေမရပါကမဖြည့်ဆည်းပါနှင့်
ငါဖေ့စ်ဘုတ်မှာရှိနေပေမယ့်အင်တာနက်ပြတ်တောက်သွားတယ်၊ နှစ်ရက်အကြာမှာငါအကောင့်ထဲကို ၀ င်ချင်တယ်၊ အင်တာနက်ပြတ်တောက်မှုမရှိပေမယ့် (ဘာကြောင့်လဲဆိုတာမသိရသေးပေမဲ့)၊ စာမျက်နှာပိတ်သွားပေမဲ့လည်းအဲဒီအစည်းအဝေးကိုမပိတ်ခဲ့ပါဘူး ။ ပြနာမှာ HOME နှင့် ACCOUNT tabs တွင်ပရိုဖိုင်းတစ်ခုမျှသာမရှိသောကြောင့်တာ ၀ န်ကိုပိတ်။ မရပါ။ အခြားကွန်ပျူတာများမှကျွန်ုပ်၏အကောင့်ကိုမည်သည့်ပြfromနာမှမရှိဘဲဖွင့ ်၍ အသုံးပြုနိုင်သည်။ ပိတ်နိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ဘာလုပ်ရမလဲပြောပြပါ
ah အခြားပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ငါဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်သည် CHIO နှင့်ဖြစ်ခဲ့လျှင်၎င်းတို့သည်အကောင့်ကိုပိတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်၊ အခြားကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်သင်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရှိသလား။
အမှန်တရားကတော့ငါဖေ့စ်ဘုတ် (သို့) အကောင့်ကိုပိတ်ရမယ့်သူရဲ့မျက်နှာကို ၀ င်ရမယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိဘူး။ ငါလုပ်ခဲ့ပြီးပြီ။ အကယ်လို့သင်မမြင်နိုင်တဲ့ရက်အနည်းငယ်တောင်မထင်ဘူးဆိုရင် သူတို့ကဘီလ်ပိတ်နိုင်လျှင်ငါစစ်ဆေး
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်မှာဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရှိအကောင့်ကိုပိတ်ချင်ပါတယ်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်မှာပြproblemနာကြီးတစ်ခုရှိတယ်၊ သူငယ်ချင်းများ။ ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျများမရရှိနိုင်ပါ။ စကားဝှက်မမှန်ကန်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်ထည့်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ အဲဒါကိုပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားပါ၊ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုစာမပို့ဘူး၊ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ပို့လိုက်ရင်ငါမရရှိရင်သူငယ်ချင်းတချို့ကငါဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာကိုပိတ်ထားလိုက်ပြီလို့ပြောတာအားလုံးကိုငါကြိုးစားခဲ့တယ် ကျွန်ုပ်အတည်ပြုပြီးသောအရာများကိုကျွန်ုပ်ပြန်လည်မယူပါ။ အကယ်၍ သင်၏တစ်ယောက်မှစနစ်၏ပံ့ပိုးသူများနှင့်မည်သို့ဆက်သွယ်ရမည်ကိုသိလျှင်အရာအားလုံးမှာအဆင်ပြေပါက၊ အကောင့်အားမည်သို့ဖျက်မည်နည်း၊ ပထမ ဦး စွာမည်သည့်သတင်းစကားကိုကျွန်ုပ်ဖျက်လိုကြောင်းပြောပြပါ။ ကျွန်ုပ်ရရှိသောအီးမေးလ်များ၏ပြIနာကြောင့်ကျွန်ုပ်ဖန်တီးမည့် Facebook အသစ်အကြောင်းကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများကိုပြောပြပါ။ ထိုအကောင့်နှင့်ထိုအီးမေးလ်ကိုဆက်လက်မသုံးစွဲနိုင်ပါ။ ကူညီပါ):
အကောင့်ထဲသို့ထည့်သွင်းမှုရှိသလား7option များသည် ACCOUNT CONFIGURATION ဟုခေါ်သော option ကိုရွေးချယ်ပါ။ DEACTIVATE ACCOUNT နောက်သို့၎င်းတို့ကိုဖော်ပြရန်သင့်အား DEACTIVATE သို့ပြောပြလိမ့်မည်။ ဒီမှာနှိပ်ပါထို့နောက်သင်ပိတ်လိုသောဝက်သား option ကိုရွေးချယ်ပါ။ ဒါကသင့်ကို digAnme လုပ်ပေးလိမ့်မယ်။ hehehe ကိုကျွန်တော်သိချင်တာနှစ်ပေါင်းများစွာ😀
အကယ်၍ သင်နားမလည်ခဲ့လျှင်၊ ကျွန်ုပ်ဘာကြောင့်ပိုကောင်းအောင်ရှင်းပြပေးမည်ကိုငါ့ကိုအသိပေးပါ
: - / XD
Paolaa Dzul ဟုသူကပြောသည်
eeeeeeem pz အမှန်တရား - ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပျူတာ (သို့) မျက်နှာ၌ဘာဖြစ်သွားသည်ကိုမသိသော်လည်း၎င်းကိုမပိတ်နိုင်ပါ။ aziino ကိုမထွက်နိုင်ပါ
Paolaa Dzul အားပြန်ပြောပါ
Wilber Ortega ဟုသူကပြောသည်
အရေးပေါ် !! ငါ AMI FACEBOOK PASSWORD ကိုပြောင်းလဲခဲ့ပြီးယခုကျွန်ုပ်သည်ကြိုးစားမှုအပြောင်းအလဲများစွာရှိခဲ့ကြောင်းကျွန်ုပ်ကိုမြင်တွေ့ရပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်အားကျွန်ုပ်၏စကားဝှက်ကိုမေ့ရန်သူပေးလိုက်ပါကအပြောင်းအလဲနှင့်ပိတ်သောအခါအိုင်ဒီသည်ကျွန်ုပ်ကို ၀ င်ခွင့်မပြုပါ။ အိုင်တီဒီစကားဝှက်ကိုငါလုပ်သောညာဘက် ON !!!!!!
ငါဟာအတုအယောင် Facebook အကောင့် HAHAHAJAJAJAJ ပဲ၊ ငါအများကြီးပဲငါကြိုက်ပေမယ့်ငါကိုယ်တိုင်မ ၀ င်နိုင်ရင်ကူညီပေးပါ။
WILBER ORTEGA သို့အကြောင်းပြန်ပါ
ငါရှုပ်ထွေးလာတယ်။ ငါထပ်မံမှတ်ပုံတင်တော့သည်။ ယခုကျွန်ုပ်ထပ်မံမှတ်ပုံတင်ခြင်းမပြုလိုတော့ပါ။ နံပါတ် (သို့) အက္ခရာ၏အက္ခရာသည် alludaa ဖြစ်သည်ကိုမသိပါ။
Andres cepeda ဟုသူကပြောသည်
ကြည့်ပါ၊ ကျွန်ုပ်မေးခွန်းကိုကြည့်ပါ၊ သူတို့သည်လျင်မြန်စွာဖြေဆိုမည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်၊ သို့သော်သူတို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုမသိဘဲကျွန်ုပ်ကိုတစ်ခုခုအနီးကပ်မဖြစ်စေလိုပါ…… !!!!
ကျွန်ုပ်တွင် Facebook ၌ကျွန်ုပ်၏အကောင့်ကိုဖွင့်ပြီး၊ ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းကိုပိတ်လိုက်သောအခါကျွန်ုပ်ဘာလုပ်သည်ကိုမသိပါ။ ကျွန်ုပ်သည် ACCOUNT သို့သွားသည့်အခါတိုင်း၎င်းသည်ယခုမပိတ်ပါ။ အခန်းကိုပိတ်ထားမည်၊ ပိတ်ထားမည်မဟုတ်ပါ H ဘာတွေဖြစ်နေသလဲ ???
andres cepeda သို့ပြန်သွားပါ
Sabrina ဒီစာမျက်နှာကဘာပြောတာလဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ xfavor kiero k ကငါရဲ့ facebook အကောင့်ကိုပိတ်လိုက်တာ
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ဖေ့စ်ဘုတ်ကိုဖျက်ချင်ပါသည်။ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏အကြီးအကဲကမီးစက်ပေးပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကို ကျေးဇူးပြု၍ လုပ်ပါ jennifervintimilla@yahoo.es ဖြစ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံး ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ (သို့) ကျွန်ုပ်၏အလုပ်မှာရှုပ်ထွေးပါသည်
ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အားရပ်ဆိုင်းထားပြီးဖြစ်သော်လည်း၎င်းကိုပိတ်ချင်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ပိတ်ပါ။ သင့်အကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ xD
franchesca guajardo ဟုသူကပြောသည်
သငျသညျအကြှနျုပျ၏ clebe သိသော ayaguieb ပေးပါ
franchesca guajardo ကိုစာပြန်ပါ
ကျွန်တော့်ကိုဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုပိတ်ပါ .. xfabor .. တောင်းပန်ပါတယ် youoooooooooooooooooooooooo !!
Florence Suarez ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးပြုပြီးမျက်နှာကိုပိတ်ပါ။ ငါကဒါကိုနောက်တဖန်မလုပ်ချင်တော့ဘူးကျေးဇူးပြုပြီးမင်းကိုမေးပါ ဦး ။
Florencia Suarez အားပြန်ပြောပါ
ana မက်ဒရစ် ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်မှာပြproblemနာအနည်းငယ်ရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်မှာ ana madrid ဆိုတဲ့ဖေ့စ်ဘုတ်အကောင့်တစ်ခုရှိပါတယ်။ မင်းမှာငါမှာ ana bettina madrid olivera ဆိုတဲ့အမည်နောက်တစ်ခုရှိတယ်…အတူတူလျှို့ဝှက်နံပါတ်အတူတူပဲ…ငါဒုတိယတစ်ခုဖျက်ပစ်ချင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါပထမသို့ဝင်သောအခါ2ကို activate လုပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုတုန့်ပြန်မှုတစ်ခုစောင့်ဆိုင်းနေပါတယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
ana madrid အားပြန်ကြားပါ
အမှန်မှာ၊ ကျွန်ုပ်သည် Facebook ၀ န်ဆောင်မှုကိုအလွန်စိတ်ပျက်မိသည်။ သူတို့မတောင်းဆိုသည့်စီးပွားဖြစ်အကောင့်အတွက်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကိုနေ့ချင်းညချင်းပိတ်ဆို့ခဲ့သည်။ ငါ့ပြproblemsနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့သူတို့ဘာကြောင့်လုပ်ကြတာလဲငါမသိဘူးလား၊ ဒါမှမဟုတ်ငါ့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုအဖြေမပေးဘဲတတိယပါတီတွေတုံ့ပြန်တာကိုပိုနှစ်သက်တာလားဆိုတာပါပဲ။ အချက်အလက်များစွာသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုပြန်လည်ရယူရန်မလိုပါ။
အယ်လီနာရှငျဘုရငျ oajaca ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ အလွန်ကောင်းသောညနေခင်း၊ အဖေကွယ်လွန်သွားပြီ။ ကျွန်ုပ်သည်သူ၏ fb အကောင့်ကိုပိတ်ရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်မည်သူမျှသူ၏စကားဝှက်မရှိပါ။ သင့်ဖခင်၏မှတ်ဉာဏ်မထိခိုက်စေရန်၎င်းမှပိတ်ထားရန်ကျွန်ုပ်လိုအပ်သည်။ အဖြေတစ်ခုတောင်းခံသည်
elena king oajaca သို့ပြန်သွားပါ
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်အားကျွန်ုပ်၏အကောင့်ကိုကျွန်ုပ်ခေတ္တပိတ်ထားပုံကိုပြောပြပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုထည့်သောအခါမမှန်ကန်ကြောင်းကိုကျွန်ုပ်ရရှိပါကကျွန်ုပ်ပုံမှန်မျက်နှာနှင့်မျက်နှာသို့ ၀ င်ချိန်မှ စ၍ အမှားတစ်ခုရှိပါသည်။ အဲဒါကိုပိတ်ထားလိုက်ပြီ၊ အဲဒီစကားဝှက်ကိုကျွန်တော်ရတယ်။ လုံခြုံရေးအကောင့်တောင်မှထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်ရန်ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့်ကိုမည်သို့ပိတ်ရမည့်အကြောင်း zaber လိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ Facebook Book (အကောင့်) ကိုဖွင့ ်၍ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းကိုသာဖော်ပြရန်တစ်ခုတည်းသောပင်မစာမျက်နှာကိုကျွန်ုပ်၏ Facebook Book အကူအညီမပေးပါနှင့်။ အစဉ်အမြဲဖွင့်ထားသည့်ငါ့ကိုမှတ်ချက်မပေးပါနှင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤပြLEနာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါက၊ နှလုံးသားကိုကျေးဇူးတင်စကားများမပိတ်ပါနှင့်
ငါ့ကိုအီးမေးလ်နှင့်ဆက်စပ်သော Facebook ကိုပိတ်လိုက်ပါ sexyvampire89@hotmail.com သတင်းအချို့ရဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်
youssssssssss ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ Facebook pls ထဲကိုဝင်ဖို့မလွယ်ဘူး! ဟေ့!
ဟယ်လို! ငါမှားယွင်းစွာ2ကြိမ်မှတ်ပုံတင်, ငါအကောင့်တစ်ခုဖျက်သိမ်းချင်တယ်, ငါ့ကိုကူညီပါ! ငါအဆုံးမဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လိမ့်မယ်!
maria sarmiento ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှကျွန်ုပ်၏စကားဝှက်ကိုမေ့သွားသည်။ ကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ရန်ပြောင်းရန်အလွန်ခက်ခဲသည်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ပြောပြပါ
maria sarmiento အားပြန်ကြားပါ
ကောင်းပြီ၊ မိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများသည်သူတို့အတွေ့အကြုံမှစွန့်ခွာခဲ့ကြပြီးကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုပိတ်ခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာလူအများ (အတင်းအဖျင်း၊ အစရှိသဖြင့်) ကျွန်ုပ်အကြောင်းကိုတီထွင်ပြီးကျွန်ုပ်၏အစ်မနှင့်ပြသနာများစွာဖြစ်စေသည်၊ သူငယ်ချင်းကောင်းများနှင့်အားလုံးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်တစ်စုံတစ်ရာပြော မိ၍ ဖြစ်စေ၊ လုပ်နိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ ကောင်းသောအရာကကျွန်ုပ်အားကျွန်ုပ်၏မိသားစုနှင့်လူတိုင်းနှင့်လုံးဝခွဲခြားထားခြင်းမရှိသောမကောင်းသောအရာတစ်စုံတစ်ခုကိုပြောခဲ့ပါကသူတို့သည်အမြဲတမ်းဇောက်ထိုးလှည့်ထွက်သွားသည်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်နှမ၊ အကောင့်ပိတ်ဖို့ဒါပေမယ့်ဖြစ်နိုင်သည်အခြားဖွင့်လှစ်ရန်
ကျွန်ုပ်၏ facebook အကောင့်ကိုပိတ်ချင်သည်။ ငါ၎င်းကိုရပ်ဆိုင်းပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းကိုလုံးဝပိတ်လိုခြင်းဖြစ်သည် -
ကျွန်ုပ်၏အကောင့်အားရပ်ဆိုင်းလိုသော်လည်းယာယီသာဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၌ပြproblemနာတစ်ခု ရှိ၍ ၎င်းသည်အချိန်တိုအတွင်းပိတ်ထားချင်ပါသည်။ ဖြစ်ပျက်သောအရာသည်၎င်းကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာရပ်ဆိုင်းခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်ပေါ်လာဆဲဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်မှတ်ချက်မပေးနိုင်ပါ။ ငါ့ကို (သို့) ငါကြိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါမပေါ်စေချင်ဘူးအဆက်အသွယ်စာရင်းထဲမှာဒါမှမဟုတ်တစ်စုံတစ်ရာကြောင့်မင်းရဲ့အကောင့်ယာယီရပ်ဆိုင်းထားစေချင်တယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
KIERO KE ကျွန်ုပ်၏ Facebook စာအုပ်ကိုပိတ်ပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ဖေ့စ်အကောင့်ကိုပိတ်ချင်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျေးဇူးပြု၍ သင်ကပိတ်ချင်ပေမယ့်ဖေ့စ်ဘုတ်အကောင့်ကိုဘယ်လိုပိတ်ရမှန်းကျွန်တော်မသိပါဘူး
မင်္ဂလာပါ ... လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကကျွန်ုပ်သည် Facebook တွင်အကောင့်တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်ခုအခြားတစ်ခုကိုပထမ ဦး ဆုံးရိုက်ထည့်ချင်သော်လည်းသင်အသုံးပြုခဲ့သောအီးမေးလ်နှင့်စကားဝှက်ကိုမမှတ်မိသေးကြောင်းသင်သိပါသည်။ ငါဘယ်လိုလုပ်နိုင်လဲသိလား .. ငါ့ကို xfa ပြန်ပြောပါ။
ငါဖွင့်ချင်တဲ့အကောင့်က mathias gustavo ojeda habeiro .. အီးမေးလ်ကိုငါမမှတ်မိတော့ဘူး။ အဲဒါကကျွန်တော်ဖွင့်ချင်တဲ့စကားဝှက်ကိုလျော့နည်းစေတယ်
ကျွန်ုပ်၏မျက်နှာကိုဖျက်သိမ်းရန်မည်သည့်အရာများရှိပါသလဲ။ ကျွန်ုပ်မ ၀ င်နိုင်ပါ။ စကားဝှက်ကိုကျွန်ုပ်မပြောင်းနိုင်ပါ။ နောက်တစ်ကြိမ် ပြုလုပ်၍ ယခင်အဖြစ်ကိုဖျက်သိမ်းချင်ပါသလား။
နီကိုးလ် (နီကီ) ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏အမည်မှာအလွန်ရေးမှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင်ရေးသားခဲ့သောမိန်းကလေးတစ် ဦး ၏မှတ်ချက်ဖြစ်သည်။ maria peruchet ကျွန်ုပ်နှင့်သူမစကားပြောချင်သည်။ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်မှထွက်ခွာလာခဲ့သောထိုလူကြောင့်တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် - n_icole@live.com.ar သူမကသူမဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အကြောင်းအရာများကိုသူမပြောပြနိုင်အောင်သူမအားထားလိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်သူတို့ကိုအလွန်ချစ်ပါသည် ps: ကျွန်ုပ်သည်မိန်းမဖြစ်သည် (နီကိုးလ်)
nicol ကိုပြန်သွားရန် (niky)
ကျွန်ုပ်၏အချက်အလက်နှင့်အတူကျွန်ုပ်၏ fb တွင်သူတို့ဖွင့်သောအကောင့်ကိုပိတ်ချင်ပါသည်။ သို့သော် MSN ဆိုသည်မှာသို့မဟုတ်စကားဝှက်ကိုမသိပါ။ heeeeeeeelp meeeeeee: S
နန်စီ gusman noriega ဟုသူကပြောသည်
ငါယုံချင်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုရုပ်ဆိုးတယ်၊ ငါမှာလည်းပြhaveနာမရှိဘူး
nancy gusman noriega သို့ပြန်သွားရန်
ဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့လဲကြည့်ပါ။ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏စာတို့ကိုဖောက်ထွင်းပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်သည် Facebook သို့မဟုတ် messenger ကိုဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ခြိမ်းခြောက်မှုများကိုခံခဲ့ရပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ Facebook အဆက်အသွယ်များသို့ပါခြိမ်းခြောက်မှုများခံခဲ့ရပါသည်။ ဒီခြိမ်းခြောက်မှုတွေကြောင့်ငါ့ဘဝမှာအန္တရာယ်ရှိနေလို့ Facebook နဲ့ messenger ကိုပိတ်ထားစေဖို့
fernanda buitrago အားပြန်ပြောပါ
holiis !!!! kero2 ha ha wue အားလုံးကို Kumbia villera နှင့် caraj0 အနီရောင်တို့ကိုကိုင်ထားသည်… ahhhh !! အာဂျင်တီးနားသွားကြစို့ !!!! အချစ်
ကျွန်ုပ်၏ Facebook နှင့် faaaaaaaaaaaaaa အတွက်လေ့လာခြင်းနှင့်ထိုအရာများမှငါ့ကိုဗဟိုပြုမိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ facebook ကိုပိတ်ချင်သည်
ကျွန်ုပ်၏ Facebook xfavor ကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးပိတ်ရန်……။
ကျွန်ုပ်ကိုဖျက်လိုက်သည်နှင့်ကျွန်ုပ်သည်ယခင်ကငွေစာရင်းတစ်ခုရှိရန်လိုအပ်သည်ဆိုသည်ကိုကျွန်ုပ်နှင့်အတူစုစည်းပါ။ ကျွန်ုပ်ပြန်လည်ထူထောင်သည့်အခါအခြားတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်ဖန်တီးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အခြားအကူအညီများကိုလိုအပ်သည်။ … (=) \_ t
ငါ့မှာဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရှိတယ်၊ အဲဒါကိုငါမေ့သွားတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါပြောင်းတဲ့နေရာမှာငါအကောင့်ရဲ့စကားဝှက်လည်းမရှိဘူး၊ တစ်နေ့ကျတော့သူတို့ကိုပြောင်းလဲပြီးမမှတ်မိတော့ဘူး။ ငါဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကြောင်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာသတင်းပို့ခဲ့ပြီး၊ ၎င်းကိုသတင်းပို့သူအမျိုးမျိုးရှိသည့်တိုင်၎င်းကိုဖွင့်ထားဆဲဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သူတို့ကို၎င်းပိတ်ရန်မည်သို့ရနိုင်မည်နည်း။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် Facebook ကိုပိတ်ချင်ပါတယ်
ငါဘာကြောင့် facebook ကိုပိတ်ဖို့လိုတာလဲ
ငါပိုပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုလာသောအခါတ ဦး တည်းဖြစ်လာနိုင်ရန်
Manuel Vasquez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ ... သူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်ကိုဖောက်ဖျက်ပြီးကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သည်ကျွန်ုပ်၏ facebokk ကိုပိတ်ပစ်ရန်ဖြစ်နိုင်သလား ?? ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်ဖြစ်သည် manuel_v5@hotmail.com... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါတင်လိုက်တဲ့အီးမေးလ်ကအခြားနည်းလမ်းတစ်ခုပဲ။ ငါချက်ချင်းတုန့်ပြန်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
Manuel Vasquez ကိုပြန်ပြောပါ
Marcia q ဟုသူကပြောသည်
ငါဒီ box ကိုဖန်တီးသည် Marcita_7_@hotmail.com ငါ၌ပြproblemsနာများစွာရှိပြီးနောက်ငါအခြားတစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်သည်။ ယခုငါသင်သည်၎င်းကိုပိတ်ရန်ကူညီပေးပါမည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Marcia Q ကိုစာပြန်ပါ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ MXO အနေဖြင့်ကျွန်တော်ကိုကူညီပေးသည်။
ps မျက်နှာကိုပုံမှန်ရိုက်သည်၊ သို့သော်ငါထွက်ခွာသောအခါငါပေးမည်၊ ပုံမှန်ဖြစ်သွားသည်။ သို့သော်အခြားသူတစ် ဦး ကသူတို့အကောင့်ကိုဖွင့်ပြီးနှစ်ချက်နှိပ်ပါ။ အဘယ်သူမျှမ pc အတွက်အကောင့်ကျေးဇူးပြုပြီးငါ့ကိုကူညီပါ
ကျွန်ုပ်သည်ဘာကိုမျှနားမလည်ကြောင်းသတိပြုပါ၊ သင်သည်ငါ့ကို @gamsuibghgbnv v gfvnfc nfvxbbg gcx နှင့်ရှင်းပြနိုင်သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင်ဖေ့စ်ဘုတ်အကောင့် ၂ ခုရှိပြီးကျွန်ုပ်အားအမြဲတမ်းဖျက်ပစ်လိုပါသည် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါ
ဖေ့စ်ဘွတ်ကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ၊ သူဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူး၊ သူကငါ့ကိုမဖွင့်ချင်ဘူး၊ ငါ့ကိုဖွင့်မပြောတတ်တဲ့ဒေါသကငါကိုငါ့မှာအရာအားလုံးရှိတယ်လို့ပြောပါ။
ကလေးငယ်ကစကားဝှက်ကိုမေ့သွားတယ်။ အဲဒီနောက်သူကကုဒ်ရေးဖို့ပြောလိုက်တယ်၊ မင်းရဲ့စာတိုပို့သူရဲ့စကားဝှက်ကိုရေးလိုက်တယ်။ ပြီးတော့သင်နှိပ်လိုက်တဲ့ input message ကို ထပ်မံ၍ စကားဝှက်ကိုဖန်တီးရတော့မယ်။
ငါ့ ... pliz ကူညီပေးပါ
ငါအရာတွေကိုဖမ်းဆုပ်ပြီးငါ nisikiera kiero aser အယ်လ်ဘမ်အားလုံးနှင့်တူညီသောအမည်များဖြင့် shitload
ALVAREZ MARIA Eugenia ဟုသူကပြောသည်
သူတို့ကကျွန်တော့်နာမည်နဲ့ထောင်ချောက်အမြောက်အများကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံများနှင့်သတင်းအချက်အလက်များ ... သူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏အဆက်အသွယ်များကိုခိုးယူပြီးကျွန်ုပ်အကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းနှင့်ကျွန်ုပ်မိသားစုအကြောင်းစတုတ္ထအချက်များကိုထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်မည်သို့မှတ်သားထားသနည်း ?????
ALVAREZ MARIA EUGENIA သို့စာပြန်ပါ
MARIA EUGENIA သို့စာပြန်ပါ
ဖြစ်ပျက်မှုကမကြာသေးခင်ကသူတို့ကငါ့ကို msn, facebook, twitter နဲ့ငါ့မှာရှိတဲ့အကောင့်တွေအားလုံးကိုဖောက်ထွင်းလိုက်တာပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါသူတို့ကိုပိတ်လိုက်ချင်တယ်။ ဒီလူဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာမသိဘူး၊ ရုတ်တရက်သူကငါ့ကိုအယောင်ဆောင်တယ်။ ။ & ငါဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုသတင်းပို့သင့်တယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့အကောင့်ကိုမပိတ်ဘူး !! တစ်ယောက်ယောက်က pliz ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိရင်ငါ့ကိုသိပါစေ။
ကျွန်ုပ်၌ရှိသောကျွန်ုပ်၏မျက်နှာနှင့်ဘာဖြစ်သွားသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ ကျွန်ုပ်၌ရှိသောအရာတစ်ခုကိုဖွင့်ပြီး nooo ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြင့်စကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲသွားသည်။ ကျွန်ုပ်အကူအညီလိုအပ်သည်ကိုမထည့်သွင်းနိုင်ပါ။ !!!!!!!!
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏မျက်နှာကိုမည်ကဲ့သို့ပိတ်နိုင်ကြောင်းသိလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်ကိုမထည့်နိုင်သောကြောင့်သူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏မျက်နှာလျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုခိုးယူခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်၏မျက်နှာကိုမည်ကဲ့သို့ပိတ်နိုင်မည်နည်း။ ကျွန်ုပ်မှသူအားခိုးယူသူသည်ကျွန်ုပ်၏အဆက်အသွယ်များကိုစကားမပြောနိုင်ပါ။
maria ယူဂျင်နီ ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဒေတာများ၊ ကျွန်ုပ်ပိတ်လိုသောဓာတ်ပုံများ၊ တိုင်ကြားချက်အပြင်ကျွန်ုပ်ပိတ်လိုသောအဆက်အသွယ်အမြောက်အများကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အားမျက်နှာချိုချိုအကောင့်တစ်ခုဖန်တီးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်စကားဝှက်ကိုမရရှိပါကမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း။
maria eugenia အားပြန်ကြားပါ
alexz Gill ဟုသူကပြောသည်
hello oie ငါလိုအပ်တဲ့အကူအညီလိုအပ်တယ်။ ကျွန်ုပ်မှာ facebook အကောင့်တစ်ခုရှိပြီးသားအီးမေးလ်တစ်စောင်ထပ်မံဖြည့်တော့မှအသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ msn အကောင့်ကိုဖျက်ပြီးပြီ။ ဒါကြောင့်ငါကဖေ့ဘွတ်မှာပထမဆုံးအကောင့်ကိုပိတ်ဖို့ပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်။ ငါ့စကားဝှက်ကိုသိပြီ ကျွန်ုပ်ထံပြန်ပို့ရန်မက်ဆေ့ခ်ျပို့ပြီးကျွန်ုပ်ထံသို့မရောက်ရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပေးပါ။ ကျွန်ုပ်အကောင့်ကိုပိတ်ချင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ msn ကိုမသုံးနိုင်တော့ပါ။ အကြောင်းမှာသူတို့သည်ငါ့ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးအသစ်တစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဖြစ်ပျက် .... = S အကူအညီကို ... !!
alexz gill အားပြန်ကြားပါ
Jose Lance သို့ပြန်ပြောပါ
ကျေးဇူးပြုပြီးသူတို့ကိုကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုပိတ်စေချင်ပါတယ် အရေးတကြီးလိုတယ် ... ငါလိုတယ်။
ဒီမှာပါ!!! သင်၏နံရံထဲ ၀ င်ပါ
ဒုတိယအချက်မှာသင်သွားနှင့်အိုင်တီတစ် ဦး က CLIK ပေးပါ။ တတိယဝင်ငွေစာရင်း
စတုတ္ထအချက်သည်သင်၏သောငွေစာရင်းကိုပိတ်ရန်နှင့်သင်၏ငွေစာရင်းသည်သမိုင်းတစ်လျှောက်တစ်နေ့တည်းတွင် FACEBOOK သို့သွားမည်ဆိုပါကသင်၏သမိုင်းကြောင်းသည်သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက် Folder တစ်ခုသို့မဟုတ်သိုမဟုတ်သောအချက်အလက်များအားလုံးကိုသိမ်းဆည်းထားသည့်အချက် ၅ ချက်ကိုဖွင့်ရန်သော့မဖွင့်ပါ။
ရွေးစရာတစ်ခုချပြီးအကောင့်ကိုပိတ်လိုက်ပါ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဒါကိုပိတ်လိုက်တာကအရမ်းကိုအေးတာပဲ။ ပြီးတော့သူတို့ကကျွန်တော့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုကူးယူနေကြတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီးတစ်ခုခုလုပ်ပါ ...
Buenooooo .. ငါအဲ့ဒီအရာအားလုံးပြီးပြီးချင်းငါ့နာမည်ပျောက်သွားသလားငါ့ကိုအမှတ်အသားပြုပြီးငါ့နံရံကိုမြင်လား? ငါမမြင်ရတော့ဘူး။
ငါ၌တူညီသောအီးမေးလ်အကောင့်တစ်ခုရှိပရိုဖိုင်းနှစ်ခုရှိသော်လည်းမည်သို့ဖြစ်ပျက်သည်ကိုငါမသိ။ ငါတစ်ခုတည်းကိုပဲပိတ်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်နှစ်ခုလုံးကိုမဖျက်ပဲဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိဘူး။ ဒီဟာကဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ၊ ဘယ်လိုပြင်ရမယ်ဆိုတာကိုတစ်ယောက်ယောက်ကပြောပြပေးနိုင်မလား။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
အကြောင်းကတော့ငါအကောင့်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကကုဒ်တခုတောင်းတယ်၊ သူတို့ကငါ့ကိုတောင်းဆိုနေတဲ့ကုဒ်ကိုမသိဘူး၊ ကျေးဇူးပြုပြီးမြန်မြန်ကူညီပေးပါ။
ငါလုံးဝမဝင်ရ !!! ကျေးဇူးပြု!
ငါဒီကိုတိုက်တွန်း !! ငါ့လက်ကိုပိတ်ပါ။
yenny sierra ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်တော့် Facebook စာအုပ်ကိုဘယ်လိုဖျက်ပစ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော့်ကိုတစ်ယောက်ယောက်ကိုပြောပြဖို့လိုတယ်။ ကျွန်တော့်အီးမေးလ်ကသူတို့နှစ် ဦး စလုံးရဲ့စကားလုံးကိုပြောင်းလဲပစ်လိုက်ပြီးမည်သူ့ကိုမျှမဝင်ရ။
yenny sierra သို့ပြန်သွားရန်
ငါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအားလုံးအောက်ပါငါ့အကောင့်ကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားပေမယ့်အဆုံးမှာသူတို့က fix ဖို့တတ်နိုင်သမျှအရာအားလုံးကိုလုပ်နေကြသည်ဟုဖော်ပြထားသောတ ဦး တည်းအရာပေါ်လာသည်။
မင်္ဂလာပါ။ အောက်ခြေမှာဒေါသထွက်နေပါတယ်။ ငါ Facebook ကိုလုံးဝပိတ်ချင်တယ်။ ငါလောင်နေတယ်။ ဒါတွေအားလုံးကိုမကြိုက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဘယ်လိုပြောနိုင်မလည်းမသိဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
လက်မှတ်; sheila-lamorocha2010@hotmail.com; (
ငါ pc ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ faccebok ထွက်လာပြီးစကားဝှက်ကိုထပ်ခါတလဲလဲမရေးလိုဘူးလားလို့တစ်ခါမှတွေးမိဖူးတယ်။ လက်ခံတယ်၊ ငါဒီစာမျက်နှာကိုအကောင့်အသစ်နဲ့အခြား feccebok ထဲသို့ဝင်နိုင်ဖို့ဒီစာမျက်နှာကိုပိတ်လို့မရဘူး။ ငါဖွင့်နေတုန်းပဲဖွင့်နေတယ်။ ပိတ်စရာ tab မရှိဘူး၊ အရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ဖေ့စ်ဘုတ်ကိုဖျက်ချင်ပါတယ်၊ အချက်အလက်ပျောက်ဆုံးလျှင်အရေးမကြီးပါ၊ ကျွန်ုပ်ဘ ၀ မှာသာနုတ်ပါမယ်
Jessenia Cedeñoချေးငွေ ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်ဓါတ်ပုံများကိုသုံးပြီးသူငယ်ချင်းများနှင့်အနှောင့်အယှက်ပေးနေသောသူတစ်စုံတစ်ယောက်ရှိပါသည်။ ပွင့်လင်းသောအီးမေးလ်မှာ Jessenia Sion ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်အလွန်အနှောင့်အယှက်ပေးခံရသည်ဟုခံစားရပါကသူမ၏မျက်နှာသို့မဟုတ်သူမ၏အမည်မဟုတ်သောဤအကောင့်ကိုပိတ်ပါ။
Jessenia Cedeño Loor ကိုပြန်ပြောပါ
ဤသည်မှာ Facebook အတွက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အကောင့်ကိုရပ်ဆိုင်းလိုပါကအဘယ်ကြောင့်မပိတ်ပါသနည်း။ မင်းမိုက်မဲလား ဒါမှမဟုတ်မင်းကလူမိုက်လား ... ဟယ်လို ... မင်းအတွက်
ကလေး ... မင်းမိုက်မဲလားဒါမှမဟုတ်မင်းမှာ ၂ မိနစ်ချက်ပြုတ်ဖို့လိုတယ်။ ဒါကအကောင့်ကိုပိတ်လိုက်သလိုပဲ။ သင်နားလည်ပါသလား ?????? ရီစရာ !!!!!!
ငါ Facebook မှာရောက်နေတာရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တယ်၊ ငါဝင်လိုက်တယ်၊ သူတို့ကကျွန်တော့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုပြောင်းဖို့ပြောတယ်၊ ငါလုပ်ခဲ့တယ်။ ဖုန်းမတောင်းခင်အထိအဆင့်အားလုံးကိုလိုက်လုပ်တယ်၊ ငါ့ကိုကုမ္ပဏီနှစ်ခုကမှတ်ချက်နှစ်ခုပေးတယ်။ ငါရှိသည်နှင့်ထို့အပြင်ငါအကူအညီတောင်းအကောင့်မရှိဘဲကျန်ရစ်ခဲ့သည်
ဟယ်လိုတစ်ယောက်ယောက်ငါ့ကိုကူညီနိူင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ Facebook အကောင့်ကိုပိတ်ချင်သည်။ xk ကျွန်ုပ်အကောင့်ထဲသို့မ ၀ င်နိုင်ပါ။ ခခအခိုးခံရပြီးခိုးယူချင်ပါသည်
သူငယ်ချင်းများကိုထည့်သွင်းခြင်းမရှိသောလူတစ် ဦး ၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကိုမြင်တွေ့ရလျှင်လူသိများသည်။ သို့မဟုတ်သူသည်ရှာဖွေမှုသို့မဟုတ်ရှာဖွေသူမှသာရှာရန်ရှာလျှင်သူသည်မည်သူကြည့်ရှုသည့်အပလီကေးရှင်းများနှင့်အုပ်စုများမှတဆင့်ရှာဖွေနိုင်သည်ကိုသိရှိနိုင်သည်။ မင်းရဲ့ပရိုဖိုင်လားမတတ်နိုင်ဘူးလားမင်းငါ့ကိုပြန်ပြောမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
အကူအညီငါဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့်ထဲမဝင်နိုင်ဘူးငါလုပ်နိုင်သလိုမင်းကငါ့ကိုပိတ်နိုင်အောင်ကူညီနိုင်တယ်။ ငါသုံးခဲ့တဲ့ဒီအီးမေးလ်ကငါ့မျက်နှာလိုပဲ x ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ။
Gonzalo Mahecha ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ဇနီး၏ခွင့်ပြုချက်မရပဲဖန်တီးထားသောဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာကိုမည်သို့အရေးတယူဖျက်သိမ်းရမည်ကိုပြောပြပါ ဦး ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်အား ၄ င်းအားဤနည်းဖြင့်စော်ကားသော်လည်း၊ လိပ်စာနှင့်စကားဝှက်ကိုပင်ကျွန်ုပ်တို့မသိပါ။
gonzalo mahecha အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်၏ MSN နှင့်ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုကျွန်ုပ်မည်သို့မြင်နိုင်ကြောင်းသူတို့ဖောက်ထွင်းခဲ့သည်
အလွန်များပြားသော quezada ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ကျွန်ုပ်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်နှင့်လျှို့ဝှက်နံပါတ်နှင့်အီးမေးလ်လျှို့ဝှက်နံပါတ်နှင့်ထပ်မံမေးမြန်းလိုသောမေးခွန်းတို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏မျက်နှာစာမှာ kellysbaronq28@hotmail.com .... ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ။
myriam quezada သို့ပြန်သွားပါ
ဒီအဖြစ်အပျက်ကကျွန်တော့်ကိုလူအများစုအဖြစ်တွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ Old E-mail အကောင့်ကိုဝင်လို့မရဘူး၊ ဒါကြောင့်ကျွန်တော့် Facebook Book ကိုကြည့်လို့မရဘူး။ ကျွန်ုပ်၏ Facebook စာအုပ်ကိုပြီးမြောက်ရန်ကျွန်ုပ်နှင့်နီးချင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်၊ အရာအားလုံးကိုကြိုးစားခဲ့ဖူးတယ်၊ ကျွန်ုပ်ရဲ့ Facebook Book PAPA ကိုဒီနည်းကိုဖျက်သိမ်းရန်မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါ။ ငါ facebbok ရှိသည်သောငါ့အဟောင်းအကောင့်ဖြစ်ပါတယ် rosy_yellow@hotmail.com
အမှန်တရားကတော့လူတိုင်းကသူတို့ Facebook အကောင့် Xq ကိုပိတ်သင့်တယ်။ ဒါ့အပြင်သင်ဟာသင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုထုတ်ဝေဖို့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလည်းမရှိ၊ တစ်ယောက်ယောက်ကမင်းရဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာလည်းသူရေးသားချင်တာကိုအပိုင်းပိုင်းခွဲခြားနိုင်တယ်။ အမှိုက်ပုံး Facebook သည်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာ၏ဒစ်ကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
David Andres ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းမှာ - ကျွန်ုပ်သည် Facebook အကောင့်ကိုမျက်နှာလျှို့ဝှက်နံပါတ်သို့မဟုတ် Hotmail စကားဝှက်ကိုမမှတ်မိလျှင်မည်သို့ဖျက်ပစ်ရမည်နည်း။ ဒါကြောင့်ငါက Hotmail ဆီကိုစကားဝှက်ပို့ခိုင်းဖို့မျက်နှာမတောင်းနိုင်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကအတူတူပဲ၊ ငါမမှတ်မိလို့ပါ။
David Andres အားပြန်ပြောပါ
ငါ၏အ Jampi ထံမှ dayana ဟုသူကပြောသည်
dayana de mi jampi အားပြန်ပြောပါ
ငါ tula ကြိုက်တယ်
luzmira marlene ဟုသူကပြောသည်
ကြည့်စမ်း၊ ငါက ၆ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးငါ့ကိုလုယူနိုင်တယ်
luzmira marlene အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မှားနေတာ၊ ဂိမ်းကကျွန်မနဲ့မကိုက်ညီသောကြောင့်၎င်းကိုကျွန်တော်ငြီးငွေ့ချင်ပါသည်၊ သတင်းကိုကျွန်ုပ် ၀ င်ရောက်သောအခါ၎င်းသည်ပြတ်သွားသည်
brisney vera ဟုသူကပြောသည်
ငါတစ်ခုတည်းကိုသာထားချင်တယ်။ ငါသော့လိုချင်တဲ့သော့တွေကိုလည်းမမှတ်မိဘူး brisney_vera19@hotmail.com gracias
brisney vera အားပြန်ပြောပါ
hola တစ် todo
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ နင့်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာမသိဘူး
မင်္ဂလာပါ Marisol၊ ကျွန်တော့်နာမည် Martina၊ ငါလည်း Lesviana ပါ၊ ကျွန်တော်ကမင်းကိုဖုန်းခေါ်နေတယ်၊ ​​မင်းငါ့ကိုမဖြေဘူး၊ လှတယ်၊ ငါမင်းကိုတွေ့ချင်တယ်၊ ငါမင်းကိုဆက်ပြီးဖုန်းပြောနေ ဦး မယ်၊ မင်းကိုတွေ့ဖို့သေတော့မယ် မင်းကိုတွေ့တော့မင်းဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာသိတယ်။ မင်းရဲ့ဓာတ်ပုံကိုမင်းရပြီ။ မင်းကမင်းကအရမ်းကိုစူပါစူပါ mega ကြီးပါ။ oh မင်းကိုအရမ်းချစ်တယ်။ နင့်ကောင်မလေးဂရုစိုက်တယ်။ PSD - မင်းကအရမ်းကောင်းတယ်။ Attete: Martina၊ မင်းရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုနှိပ်စက်၊ နုတ်ဆက်ပါတယ်၊ အနမ်းတွေအများကြီး၊ လှပသောမိန်းကလေး။ သင်ကကောင်းတယ်။
အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မွေးနေ့သည်13ပြီ ၁၃ ရက်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်မိုင်ယာမီရှိပါတီကိုဖိတ်ကြားပါမည်။ ဖခင်ဖြစ်ပါမည်။ ကျွန်ုပ်၏အိမ်တွင်သင့်အားစောင့်ဆိုင်းပါမည်။ ၂၃ လမ်း၊ Coral ရိပ်သာလမ်း၊ အိမ် ၅၆၊ မိုင်ယာမီတွင်မမေ့ပါနှင့် အိုကေ၊ မင်းကိုစောင့်နေတယ် chayito
အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်လိင်တူချစ်သူတစ် ဦး ပါ။ ကျွန်ုပ်ရည်းစားကိုရှာဖွေနေသည်၊ ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းနံပါတ် - 76890132 နှင့်ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းမှာ - 5154890076, ကျွန်ုပ်သည်လိင်တူချစ်သူတစ် ဦး ကိုသာမန်မျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်နေသည်။ ငါ့နာမည်နုတ်ဆက်ပါတယ် Marisol ဖြစ်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါကလေးမလေး၊ လှလှလေးငါမင်းကိုဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူး၊ နောက်တစ်နေ့ငါနဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အဲဒီညမှာအဲဒီညမှာမင်းကကျားကောင်မလေးလိုလုပ်ခဲ့တယ်၊ ငါ့ကိုဘယ်သူမှမလုပ်ချင်ကြဘူး၊ chichis ရှိပေမယ့်သူတို့ကို Sabrina လိုငါစီမံပြီးပြီ။ သူတို့ကမင်းကိုနမ်းတဲ့အခါသူတို့ကချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်၊ အထူးသဖြင့်မင်း Martina လိုမျိုးခွေးနဲ့ချစ်ကြိုက်ရင်၊ မင်းဒါကိုဘယ်လိုကောင်းကောင်းလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိတယ်၊ ငါလည်းမင်းမှာရှိတယ် ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာသိဖို့ခွဲစိတ်ကုသမှု၊ chichis အဆင်ပြေပါတယ်။ နင်ငါ့ကိုငါအရမ်းချစ်တယ်။
ဒါပေမယ့်ငါမှာဖေ့စ်ဘုတ်ရှိတယ်၊ ငါစကားဝှက်ထည့်လိုက်တယ်၊ ကံမကောင်းတာကသင်က Facebook ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုမဖြည့်ဆည်းဘူး၊
ဟေ့၊ ငါငါ့မျက်နှာကိုမ ၀ င်နိုင်ဘူး။ ငါရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စကိုချိုးဖောက်တဲ့စာတစ်စောင်ရတယ်။ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုမသန်စွမ်းလို့ထင်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဘယ်လောက်ကြာလဲ၊ ဘယ်လောက်ကြာမလဲ။ ငါလည်းဒီဟာကယာယီပဲဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။ သူတို့ကငါ့ကိုမကြာခင်လာနိုင်မှာလား၊
HELP ကျေးဇူးပြုပြီး🙂သူသည်အရာအချို့ကိုစာပုံးထဲတွင်စစ်ခဲ့သည်။ /
ငါလုပ်ချင်တာကငါ့အကောင့်ကိုဖျက်ပြီးအသစ်တစ်ခုလုပ်လိုက်ရုံပဲ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ပင်မစာနှင့်အတူ - ဟုတ်ကဲ့၊ : /
ငါ Orto-Grapphia ၏များစွာသောအမှားများယေဂျေရှိသည်မဟုတ်သော WHO က FEISVUC YGUAL JEJEJE VAA LLO ငါရှိသည်
Ricardo gabriel Morice Mora ဟုသူကပြောသည်
၁၃ နှစ်၊ ၁၄ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးမင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်ကိုထည့်လိုပါကဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရှိသူဖြစ်ပါသည် - ricardo gabriel morice mora သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ် rgabrielmorice98@hotmail.com
ricardo gabriel morice mora အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၉ နှစ်သာရှိသေးသည့်မိန်းကလေးတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်သည်အလွန်ငယ်ရွယ်သူဖြစ်ပြီးသူတို့ကကျွန်ုပ်အားလုယက်ခြင်းသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ခုကိုတို့ထိခြင်းတို့ကြောင့်ကြောက်မိပါသည်။ ကျွန်ုပ် Facebook အကောင့်ကိုပိတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်သင်၏အချက်အလက်များကိုမည်သည့်အတွက်လိုချင်သည်ကိုလည်းကျွန်ုပ်မသိပါ။ သင့်ထံမှတစ်ခုခုခိုးယူရန်
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရှိသင်၏အကောင့်ကိုဖျက်ရန်သင်ကူညီရန် သွား၍ ရှာဖွေရန်နှင့်ဖျက်ရန်အကောင့်ကိုအမြဲတမ်းရေးထားရန်လိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှဖြစ်ပြီးအသက် ၁၆ နှစ်ပါ။
ငါမျက်နှာအကောင့်ကိုပိတ်ချင်တယ်, ဒါကြောင့်ငါ့ကို option ကိုမပေးပါဘူး။
mulushewa tadesse ဖြစ်သည် ဟုသူကပြောသည်
ငါ facebook ကိုကြိုက်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒါကငါ့မိသားစုဝင်တွေအားလုံးနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်ပေးတယ်။ အဲဒါကငါ့ကိုချီးမွမ်းခွင့်ပေးတယ်။
mulushewa tadesse အားပြန်ကြားပါ
ငါ Facebook အကောင့်ကိုနှစ်သက်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်း ၅၀၀၀ ရှိခဲ့ပြီ။ အစ်ကို ၅၀ ဟာအစ်ကို ၅၀ ရှိပေမယ့်ငါ့ရဲ့ NVIO ကအရမ်းကိုစိတ်အားထက်သန်တယ်🙁 SO KE LO KERO CERAR PAAR 5000PRE ငါမနိုင်
Carlos Diaz ဟုသူကပြောသည်
carlos diaz သို့ပြန်သွားရန်
ကျွန်တော် FC မှထွက်မသွားချင်ပါဘူး ကျွန်ုပ်လိုချင်သည်မှာကျွန်ုပ်၏ဓါတ်ပုံများနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်၏ဓါတ်ပုံများကိုယူပြီးဂိမ်းများနှင့်အရေးမကြီးသောအရာများနှင့်တစ် ဦး တည်းသီးသန့်ထားပါ။ ကျွန်ုပ်၏ဓါတ်ပုံများကိုဖျက်ပစ်လျှင်ကျွန်ုပ်မသိသောအရာဖြစ်သည်။
ငါပယ်ဖျက်ဖို့ဘယ်လိုနားမလည်ခဲ့ဘူး, ငါကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် chucha ta la wa ဘယ်မှာအကောင့်ကိုငါပိတ်ထားဘူး?
ကျွန်ုပ်၏ facebok အကောင့်ကိုဖျက်သိမ်းချင်ပါတယ်
deface profile များကိုဘယ်လိုဖျက်သိမ်းမလဲ
ငါထင်တာကတော့အကောင့်ကိုလုံးဝဖျက်ပစ်ဖို့ option ကို enable လုပ်သင့်တယ်လို့ငါထင်တယ်
ငါတစ်စုံတစ် ဦး ၏အကောင့်ကိုပိတ်ထားချင်သည်။ ခြေလှမ်းအားလုံးကိုလိုက်ပြီးအဆုံးမှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုစကားဝှက်တောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်မသိပါ၊ ဤသူသည်တာ ၀ န်ကိုမပိတ်သောကြောင့်သူတို့၏မျက်နှာကိုကျွန်ုပ်ရိုက်ထည့်နိုင်ပြီ၊ လုပ်လား
ဒေးဗစ် ojeda ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်မျက်နှာနှင့်ပြPROနာတစ်ခုရှိပြီကျွန်ုပ်၏ Facebook Book ကိုမငြင်းနိုင်ပါကဝမ်းနည်းပါသည်၊ သင်အသုံးပြုသောကွန်ပျူတာ (သို့) စက်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိပါ။ *** *** 031 နံပါတ်မှသင်၏စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများကိုစစ်ဆေးပြီးလုံခြုံရေးကုဒ်ကိုထည့်ပါ၊ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ …………။
david ojeda အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသောပြaနာတစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၌မရှိသောမှတ်ချက်များကိုရေးထားပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ပြသနာများဖြစ်စေပါသည်
Angela Berenice Sánchez Reyes ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ, ငါဖြစ်စေ wey မသိရပါဘူး
elangela Berenice Sánchez Reyes အားပြန်ပြောပါ
Hotmail ကနေ yahoo.es ဆီကိုအဆက်အသွယ်တွေပိတ်ဆို့ခြင်းမရှိဘဲဘယ်လိုလွှဲပြောင်းခွင့်ရမလဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်၏ Facebook အီးမေးလ်ကို Hotmail အကောင့်မှအဘယ်ကြောင့်ပိတ်ဆို့ထားရသည်ကိုကျွန်ုပ်သိချင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သိရှိလိုသည်မှာကျွန်ုပ်၏အဆက်အသွယ်များကိုမည်ကဲ့သို့ရိုင်းစိုင်းစေနိုင်သနည်း။
ငါထင်တာကတော့ Facebook အကောင့်ကိုတစ်လအတွင်းမဖွင့်ဘူးဆိုရင်သူတို့ကအကောင့်ကိုဖျက်ပစ်သင့်တယ်
ဟိုဆေးဟာနန်ဒက်ဇ် Carine ဟုသူကပြောသည်
ငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယခုအချိန်တွင် Facebook ပေါ်မှာဆက်လက်ချင်ကြဘူး
jose hernandez carine အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့်ကိုဖျက်ချင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်မလုပ်နိုင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း🙂
မင်္ဂလာပါ။ လွန်ခဲ့သောအချိန်ကကျွန်ုပ်၏ Facebook ကိုအမှန်အတိုင်းပိတ်လိုက်ခြင်း၊ ခိုးယူခံရခြင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည်မဖွင့်သည့်အချိန်တွင်မည်သို့သိနိုင်သနည်း။
ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘုတ်အကောင့်ကို ၁၅ ရက်အတွင်းဖျက်သိမ်းရန်လိုအပ်ပြီး၊ များစွာသောအခြားအရာများလည်းပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်သည်
Apple ရဲ့ TouchID ဟာအလဟ။ ဖြစ်သွားတယ်
iPhone 6S မှဘာတွေမျှော်လင့်ရမလဲ။